~ ဏီလင်းညို ~: December 2010
စာရေးသူ ~ဏီလင်းညို~ စာရေးပြီးချိန် 10:46 PM 55 comments:
Labels: ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ, အထူးပို့စ်, ကြေငြာ
တကယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်သူ့ကိုဘာကြောင့်များ တစ်ရှိုက်မက်မက်နဲ့ ချစ်နေမိခဲ့သလဲမသိပါဘူး။ အဲ့ဒီလို တွေးကြည့်မိတိုင်းလည်း မြူခိုးတွေကို လက်နဲ့လိုက်ဖမ်းနေရသလိုပါပဲ။ ဘယ်တော့မှ ရေရေရာရာမရှိခဲ့ဘူး။ တစ်ခါတစ်ခါ မျက်လွှာလေးကို ပင့်ပင့်ကြည့်ပြီး ခပ်ထေ့ထေ့ပြုံးတတ်တဲ့ သူ့ရဲ့အပြုံးလေးတွေကြောင့်လား၊ ဒါမှမဟုတ် လေပြေကလေးတွေဝှေ့ယမ်းပြီး တိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာလွင့်မျောနေတတ်တဲ့ သူ့ရဲ့ဆံ ပင်ရှည်ရှည်လေးတွေကြောင့်ပဲလား။ ဘာကြောင့်မှန်းရေရာသေချာစွာမသိနိုင်ခဲ့ရပေမယ့် ကျွန်တော်သူ့ကို သိပ်ချစ်တယ်။
ကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်တဲ့အချစ်က “မဧ၀”ပေါ်မှာထားရှိခဲ့တဲ့ “ကိုအာဒံ”ရဲ့အချစ်ထက်ပိုချင်ပိုနိုင်မယ်။ နွေဦးမှာ ပွင့်ဖူးတတ်ကြတဲ့ပန်းဦးလေးတွေထက်လည်း ပိုပြီးလှပနိုင်တယ်။ ပြီးတော့ သစ်ရွက်ကလေးတွေ မိုးကာလမှာ စိမ်းမြလတ်ဆတ်ကြတာထက်လည်း ပိုပြီးလန်းဆန်းနိုင်သလို၊ ဆောင်းမှာဝေတတ်တဲ့ နှင်းမြူလေးတွေထက် လည်းပိုပြီးအေးမြဖြူစင်နိုင်ပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုအချစ်မျိုးတွေနဲ့ ကျွန်တော့်နှလုံးသားမှာ ပန်းတွေဝေနေအောင်ပွင့်နေခဲ့ပေမယ့် တစ်ပွင့်......၊ တစ်ခိုင် လောက်တောင်မှ သူ့ကိုပေးမိဖို့မကြိုးစားဖြစ်ခဲ့ရသေးဘူး။ သူနဲ့အဝေးဆုံးနေရာမှာ တိတ်တိတ်လေး ကြေကွဲ နေရဖို့အတွက် သေမလောက်ကြောက်လန့်နေတတ်ခဲ့ပေမယ့်သူနဲ့တွေ့ရင် ကျွန်တော့်နှုတ်ကဆွံ့အနေတတ် ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ထဲက ချစ်ခြင်းရဲ့သံစဉ်တွေကို သွန်ချဖို့အတွက် လက်တွန့်နေတတ်ခဲ့တယ်။ မဖွင့်ဟချင်တာမဟုတ်ဘူး၊ မ၀ံ့မရဲနဲ့ ပြောမထွက်ခဲ့တာ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါမို့ပါပဲ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ငယ်သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့(ကျွန်တော်ချစ်နေမိခဲ့တဲ့)သူ့ရဲ့အကြောင်းကို အမှတ်မထင်သိ ခွင့်ရလိုက်လို့ပါပဲ။ ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုပါ။
တစ်နေ့မှာ ကျွန်တော့်အိမ်ကို သူရောက်လာတယ်။ သူရောက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်က ကဗျာစာအုပ် တစ်အုပ်ထဲမှာ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို တကုပ်ကုပ်နဲ့ရေးနေမိချိန်။ ပြီးတော့ အဲ့ဒီကဗျာစာအုပ်လေးထဲမှာ ရေးထား မိခဲ့တဲ့ခံစားချက်ပေါင်းစုံရဲ့မြစ်ဖျားခံရာရပ်ဝန်းက သူတစ်ယောက်တည်းသာပါပဲ။ အဓိပ္ပါယ်အားလုံးကလည်း သူ့ကိုကျွန်တော် တစ်ဖက်သတ်ချစ်နေမိခဲ့တယ် ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့။ အဲ့ဒီကဗျာစာအုပ်လေးကိုသာ သူဖတ်မိ ခဲ့မယ်ဆိုရင် သူ့အပေါ်မှာထားမိခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့တစ်ဖက်သတ်ချစ်ခြင်းတွေကို သူရိပ်မိသွားမှာမလွဲပါဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့်မို့ သူ့ကိုတွေ့လိုက်တော့ ကဗျာစာအုပ်လေးကိုဖွက်ဖို့ ကျွန်တော်ကြိုးစားပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ အမြဲလိုလို ကျွန်တော့်အပေါ်မှာနိုင်စားတတ်တဲ့သူ့အကျင့်အတိုင်း “နင်ကဘာဖြစ်နေ တာလဲဟဲ့”လို့ မည်တွန်တောက်တီးပြီး ယူသွားပါတယ်။ ပြီးတော့ မျက်နှာထားခပ်မာမာနဲ့တောင် ကျွန်တော့် ကိုပြောသွားသေးတယ်။ “နင်ငါမသိပဲ ဘာတွေမဟုတ်တာလုပ်နေသလဲဆိုတာကို စုံစမ်းလို့ရရင် နင်သေ မယ်”လို့ပါ ပဲ။ ကျွန်တော့်မှာတော့ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ရယ်ပေါ့။
အဲ့ဒီလိုနဲ့ ကဗျာစာအုပ်လေးကို သူယူသွားခဲ့ပြီး တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ ခပ်လန့်လန့်နဲ့ ကျွန်တော်သွား ပြန်တောင်းမိခဲ့တယ်။ သူ့အိမ်မှာပါပဲ။
စကားမစပ်ပြောပြရရင် သူ့နာမည်လေးက ‘စံပယ်လွင်လွင်’လို့ခေါ်တယ်။ တကယ်တမ်းလည်း စံပယ်ပွင့် လေးတစ်ပွင့်လို သူဟာနူးညံ့ညင်သာသူလေးတစ်ယောက်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အပေါ်မှာဆိုရင်တော့ စိတ်ကလက်တစ်ဆစ် လို့ပြောရင်တောင်ရမယ်ထင်ပါရဲ့။
ကျွန်တော့်စကားကို သူကဆိုဖာခုံပေါ်မှာ အခန့်သားထိုင်နေရင်းကနေပြီး နံရံမှာချိတ်ထားတဲ့ သူလွယ်နေကျ အိတ်ကိုညွှန်ပြရင်း “အဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာ”လို့ ခပ်အေးအေးပြောတယ်။ သူ့ပုံစံကို ကြည့်ရတာ အခုမှသင်တန်းက နေပြန်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပါ။
သူ့လွယ်အိတ်ထဲမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ကဗျာစာအုပ်လေးကို အလောတကြီးနဲ့ရှာမိလိုက်တယ်။ တွေ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ကဗျာစာအုပ်လေးအပြင် နောက်ထပ် စာတစ်စောင်ပါတွေ့လိုက်ရသေးတယ်။ စာလေး ကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီး၊ သူ့ကိုထောင်ပြလိုက်ရင်း ကျွန်တော်မေးလိုက်မိတယ်။
ဆိုဖာပေါ်မှာ မှီနွဲ့စွာခွေပြီး မျက်လုံးတွေကိုအသာမှိတ်ထားတဲ့သူက ကျွန်တော့်အသံကြောင့် မျက်ခွံတွေကို အသာပင့်ကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့မျက်လုံးတွေက အစိမ်းရောင်လက်ခနဲသန်းသွားတယ်။ နောက်...ကျွန် တော့်အနားကို အလျှင်အမြန်လျှောက်လာပြီး လက်ထဲကစာကိုဖျတ်ခနဲဆွဲယူလိုက်တယ်။ နောက် မျက် မှောင်ကိုအတွန့်ချိုးပြီး ခပ်သွက်သွက်ဖတ်တယ်။ ပြီးတော့မှ မျက်နှာကိုမော့၊ ကျွန်တော့်ကိုခပ်မာမာကြည့်ရင်း ခပ်ငေါ့ငေါ့လေသံနဲ့ပြောတယ်။
“ဘာစာဖြစ်ရမှာလဲ....။ ဒါ ရည်းစားစာလေ”.....
ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ ပူခနဲတစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်....။ သူကဆက်ပြောတယ်...။
“ထင်သားပဲ။ ဒီပုံစံပဲလာမယ်ဆိုတာ။ ယောက်ျားတွေများ နည်းနည်းလေးမှအရောဝင်ဖို့မကောင်းဘူး။ အခု ငါတက်နေတဲ့ စာရင်းကိုင်သင်တန်းကတစ်ယောက်လေ။ ဒင်းကို စာအုပ်တစ်ခါလောက်ငှားမိ၊ နှစ်ခါ လောက် ပြုံးပြီးစကားပြောမိတာနဲ့ ငါ့ကိုအခုတော့ ရည်းစားစာပေးတာခံရပြီ။ ဘယ်အချိန်များ လာထည့်သွားတယ် မသိဘူး။ ဟင်း”.....
သူအခုတက်နေတဲ့ စာရင်းကိုင်သင်တန်းဆိုတာကို စိတ်မ၀င်စားလို့ကျွန်တော်လိုက်မတက်မိတဲ့အတွက် အဲ့ဒီတစ်ယောက်ကို ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကလည်း ကိုယ့်အားနည်းချက်နဲ့ကိုယ်ဆိုတော့ ဘာမှမထောက်ခံရဲ၊ အကြံမပေးရဲပဲ အသာလေးငြိမ်ပြီးနားထောင်နေလိုက်မိတယ်။ သူက ခပ်ထေ့ထေ့လေး ပြုံးပြီး ဆက်ပြောတယ်....။
“အင်း....ငါ့ကတော့ ယောက်ျားတွေဆိုတာ အခွင့်အရေးသမားတွေလို့ပဲမြင်တယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက် နဲ့ခင်မင်ခွင့်ရရင် စာပေးကြမယ်။ ချစ်သူဖြစ်သွားရင် ဟိုချိန်းဒီချိန်းလုပ်မယ်။ နောက် ပါးလေးနှဖူးလေးနမ်း ချင်ရတာနဲ့။ ပြီးရင်တော့ တစ်ဆင့်တက်ချင်လာကြပါပြီ။ အဲ့...မိန်းကလေးဖက်ကနေ လိုက်လျောမိပြီဆို သွားရောပဲ။ တစ်လျှောက်လုံးနိုင်စားကြတော့တာ။ အောင်မယ်....အချို့ဆို ရည်းစားဘ၀မှာတင် ဆံပင်ဖြူ နှုတ်ခိုင်းရတာနဲ့ ၀က်ခြံညှစ်ခိုင်းရတာနဲ့ဟဲ့....သိလားကိုထူးရဲ့”....
သူ့ရဲ့စကားတွေက သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ ကျွန်တော့်ကိုစောင်းပြောနေသလိုပဲ။ အဲ့ဒါကြောင့် နားထောင်နေ ရင်းနဲ့ ကျွန်တော့်ရင်တွေ ခြောက်ခြောက်ခြားခြားအခုန်မြန်လာတယ်။ ပြီးတော့ အခုအချိန်မှာ ကျွန်တော့် မျက်နှာကို ကိုယ်တိုင်ပြန်မမြင်နိုင်ပေမယ့် စိတ်မှန်းနဲ့ပြန်ကြည့်မိတော့ အိုးတိုးအမ်းတန်းနဲ့ ဇောချွေးအထပ် ထပ်ပြန်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ပြောမိပြောရာ စကားတစ်ခွန်းကို ကျွန်တော်ပြောလိုက်မိပါ တယ်။
“နင်ကလည်းဟာ..မိန်းကလေးဘက်က ချစ်လို့လုပ်ပေးတာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့။ တစ်ဖက်သတ်ကြီး နဲ့”...
ကျွန်တော့်ရဲ့ ချေပစကားတောင်မဆုံးလိုက်ရပါဘူး....။ သူ့လက်က ကျွန်တော့်ဗိုက်ခေါက်ကို လိမ်ဆွဲပြီး....
“အောင်မာ...၊ နင်ကများ လာသေးတယ်။ နင်ဘာသိလို့လဲဟင်။ ဒီမှာ ကိုထူး၊ နင်လည်း ကြပ်ကြပ်သတိထား နေစမ်းပါ။ နင့်ကိုယ်နင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆိုပြီးတော့ ရုတ်ရုတ်ရုတ်ရုတ်လုပ်မယ်မကြံနဲ့။ ငါ့လက်ချက် မိသွားမယ်။ နင်က ငါ့မျက်စိထဲမှာ ကလေးပဲရှိသေးတာ”...
သူ့စကားတွေကို အသာငြိမ်ကာနားထောင်ရင်း ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ အောင့်သက်သက်ဖြစ်သွားရတယ်။ သူနဲ့ ကျွန်တော်က သက်တူရွယ်တူချင်းကိုများ၊ သူက ကျွန်တော့်ကို ကလေးလို့မှတ်တယ်တဲ့လေ။ ဒီကောင်ကဖြင့် သူ့ကို ကျိတ်ချစ်နေတာကြာလှခဲ့ပြီ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီလိုမျိုးယောက်ျားလေးတွေအပေါ်မှာ ထားတတ်တဲ့သူ့ရဲ့ သဘောထားတွေ၊ အပြောမျိုးတွေ၊ ကျွန်တော့်ကိုနိုင်စားတဲ့ အလိမ်အခေါက်တွေနဲ့ အဲ့ဒါတွေထက်ဆိုးတဲ့ ကျွန်တော့်အပေါ်မှာ သူမုန်းတီးစိမ်းကားသွားမှာတွေကိုကြောက်လို့ ကျွန်တော်ဖွင့်ဟမပြောရဲခဲ့တာ၊ မျိုသိပ်ခဲ့ မိတာတွေဟာ တွေးကြည့်ရင် မလွန်လောက်ခဲ့ပါဘူး။
ငါဟာ မင်းကိုချစ်ခဲ့မိသူပါ။ ။
သင်တန်းနဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာရပ်ထားတဲ့ ကားဘောနက်ဖုံးကိုတစ်စောင်းမှီပြီးရပ်ပြီး လက်ကနာရီကို ငုံ့ ကြည့်နေတဲ့သူ့ကို အဝေးကလှမ်းမြင်ရုံနဲ့ပဲ လှမ်းနေဆဲဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကို အရှိန်ပိုမြှင့် လိုက်မိတယ်။ သူ့ဆံပင်ရှည်ရှည်တွေကို ကျောဖက်ကနေသိမ်းယူပြီး အရှေ့ဖက်ကိုချထားတာလှမ်းမြင်ရုံနဲ့ပဲ သူစိတ်တိုနေပြီဆိုတာကို ကျွန်တော်ရိပ်မိလိုက်ပါပြီ။
သူနဲ့ မနီးမဝေးနေရာအရောက်မှာပဲ ကျွန်တော်လာမယ့်လမ်းဖက်ကိုလှမ်းမျှော်ကြည့်လိုက်တဲ့သူ့မျက်ဝန်း တွေနဲ့တန်းခနဲသွားဆုံတယ်။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ အေးခ,နဲဖြစ်သွားတယ်။ သူအဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်တိုင်း ကျွန် တော်ချစ်တယ်။ ပြီးတော့ ကျောထဲမှာလည်း စိမ့်ခ,နဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်။
သူ့ရှေ့မှာအပြစ်ရှိသူတစ်ယောက်လို ခြေစုံရပ်လိုက်မိတော့ သူကပေစောင်းစောင်းနဲ့မျက်လွှာကိုပင့်ပြီး ကျွန်တော့်ကို ခြေဆုံးခေါင်းဆုံးကြည့်တယ်...။ ပြီးတော့....
“သင်တန်းပြီးတာ မိနစ်နှစ်ဆယ်တိတိရှိနေပြီ....၊ နင်ဘယ်သွားပြီး အလေလိုက်နေတာလဲ ပြောစမ်း”....
“ငါ ကိုသက်နဲ့ ကန်ဘောင်ဖက် ခဏလိုက်သွားလို့ပါဟာ....။ သူက ကိစ္စလေးတစ်ခု တိုင်ပင်ချင်တယ် ဆိုလို့”..
“အောင်မာ...နင်ကများ ဒီနှာဘူးနဲ့လိုက်သွားပြီး အတိုင်ပင်ခံအမတ်မင်းလုပ်နေခဲ့တယ်ပေါ့လေ။ ငါကတော့ ဒီမှာတစ်ယောက်တည်းစောင့်လို့၊ ကဲ ဆိုစမ်းပါဦး။ ဒီလောက်တောင်ကြာရအောင် ဘာတွေများအရေးတ ကြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသလဲဆိုတာ”...
ကျွန်တော်ဘယ်ကစပြောရမလဲ မသိဘူးဖြစ်သွားတယ်....။ အဲ့ဒါကြောင့် လွယ်ထားတဲ့ကျောပိုးအိတ်ရဲ့ကြိုး ကိုပဲ အဓိပ္ပါယ်မရှိ လုံးခြေနေလိုက်မိတယ်။
အဲ့ဒီတော့ သူကအားမလိုအားမရဖြစ်လာတဲ့ဟန်နဲ့ ကျွန်တော့်ကိုတစ်ချက်ကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ စိတ်ဆတ်သူပီပီ ကျွန်တော့်အင်္ကျီကော်လံစကို မမှီမကမ်းနဲ့သူ့ဖက်ငိုက်ပါလာအောင် လှမ်းဆွဲပြီး သဟောက်သဟာလေသံမာနဲ့ ထပ်မေးတယ်....။ ကျွန်တော်က ငုံ့ကိုင်းကိုင်းဖြစ်သွားပြီး သူကခြေဖျားလေးထောက်လို့ပေါ့။ ကျွန်တော် တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အနေအထားကလည်း နည်းနည်းနီးကပ်သွားရတော့တယ်။
“ပြောလေ...၊ ငါစိတ်တိုနေတာကို နင်သိတယ်နော်။ နင်မပြောရင် ငါ့အဆိုးမဆိုနဲ့”.....
ကျွန်တော်စကားကို ရှေ့ဆက်မရဲဘူး။ သူ့ဒေါသကို ကျွန်တော်သိနေလို့ပဲ။ ဒါပေမယ့် သူကမနေဘူး။ ကျွန် တော့်ဆီကစကားသံထပ်ထွက်မလာတော့ ဂုတ်ပိုးနေရာမှာ တင်းခနဲဖြစ်သွားတဲ့အထိထပ်ဆောင့်ဆွဲလိုက်ပြီး
“သူက ဘာဖြစ်သလဲ ပြောလေ”...
ကျွန်တော့်စကားတောင် မဆုံးလိုက်ရပါဘူး၊ ‘ဘာ’ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့အသံကကျွန်တော့်နားထဲမှာ ဟိန်းခနဲထွက် လာတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ကို ကော်လံဆွဲထားတဲ့လက်နဲ့ပဲ ဆတ်ခနဲ ဆောင့်တွန်းပစ်လိုက် တယ်။ ထင်မှတ်မထားတဲ့အပြင် ရုတ်တရက်မို့ ကျွန်တော်ဟန်ချက်ပျက်ပြီး နောက်ကို လန်ထွက်သွားရတယ်။ အဲ့ဒါကို သူကအေးစက်စက်နဲ့ကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ထုံးစံအတိုင်း ခပ်ထေ့ထေ့လေးပြုံးပြီး‘ပွဲစားလုပ်လာ ပြန်ပြီပေါ့ ဟုတ်လား’လို့ အံကြိတ်သံနဲ့ ခပ်သဲ့သဲ့ပြောတယ်..။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကို အနားမှာရှိတဲ့ လူတချို့ကမသိမသာကြည့်နေကြတာကြောင့် ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တော်တော်လေးရှက်သွားတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ကားပေါ်ကိုမောင်းသူနေရာ ဘက်ကနေအမြန်တက်လိုက်တယ်။ သူ ကျွန်တော့်ဘေးနားမှာ ၀င်ထိုင်လို့လည်းပြီးရော အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင် ကနေ ကားကိုအမြန်ဆုံးမောင်းထွက်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်...။
ခုနကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ အင်းလျားလမ်းမပေါ်ကိုလည်းရောက်ရော လမ်းဘေးတစ်နေရာမှာ ကားကိုကျွန်တော်ထိုးရပ်မိလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမှ ဆက်မောင်းလို့မရတော့လို့ပါ။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ ရှက်ရွံ့ခြင်းတစ်ဝက်၊ ၀မ်းနည်းကြေကွဲခြင်းတစ်ဝက်နဲ့မို့ ကားစတီယာရင်ပေါ်မှာလက်တင်ပြီး မျက်နှာကိုအပ် ထားလိုက်မိတော့တယ်။ သူကျွန်တော့်အပေါ်မှာ အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ အမြဲပဲအနိုင်ယူတတ်လွန်းတယ်။
ဒါပေမယ့် တကယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကိစ္စမှာသူမမှားဘူး။ ပြောကြစတမ်းဆိုရင် ကျွန်တော်ကလည်း ကျွန်တော် ပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကို အခုတက်နေတဲ့ အိုင်တီသင်တန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ် သိပ်ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ငယ်သူငယ်ချင်းတွေလို့ပဲ အများကြသိထားကြတာမို့လို့ပါ။ အဲ့ဒီ တော့သူ့ကိုကြိုက်တဲ့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေက အနေတည်တဲ့သူ့ကို တိုက်ရိုက်ဖွင့်မပြောရဲကြတိုင်း ကျွန် တော်ကနေတစ်ဆင့် စာပေးခိုင်း၊ ပြောခိုင်းကြတာ လေး၊ ငါးခါလောက်တော့ရှိပါပြီ။
ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာသူ့ကို အသက်တမျှချစ်နေခဲ့ရတာမှန်ပေမယ့်လည်း အဲ့ဒီလိုမျိုးသူငယ်ချင်းတွေလာပြီး နားပူနားဆာလုပ်ရင် မနေနိုင်ပါဘူး။ အားနာမိတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ကိုယ်စား သူ့ကိုပြောပေးခဲ့တာလည်း လေး၊ငါးခါမကတော့ပါဘူး။ နောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်နေခဲ့တာကို သူမပြောနဲ့၊ ကျွန်တော့ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးယောက်ျားလေးသူငယ်ချင်းတွေတောင်မှမသိပါဘူး။ တစ်ဆင့်စကားနဲ့ သာသူပြန်ကြားမိ သွားခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြားကသမိုင်းကြောင်းတွေကို အမုန်းစာမျက် နှာတွေနဲ့ သူအစား ထိုးပစ်လိုက်မှာကြောက်မိလို့ပါပဲ။ သူ့ကို ကျွန်တော်မဖွင့်ဟရဲခဲ့တာတွေထဲမှာ သူမုန်းသွား မှာထက်၊ အခုလို သူနဲ့ပတ်သတ်နေခွင့်လေးတွေ လောင်ကျွမ်းပျက်စီးသွားမှာကိုစိုးမိတာ ထိပ်ဆုံးကနေရာ ယူထားပါတယ်။ ချစ်ခွင့်မရရင်လည်းနေပါစေ၊ သူ့ဘေးနားမှာ အခုလိုသူငယ်ချင်းအဖြစ်နဲ့သာ အမြဲနေခွင့် ရမယ်ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်နေပျော်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ထဲက သူ့အတွက်အုံ့ပုန်း ချစ်ခြင်းတွေကတော့ ဘယ်တော့မှ ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်မထင်ပါဘူး။
“ဟဲ့....၊ ဒါက ဘာဖြစ်နေတာတုန်း”...
အနည်းငယ်ပျော့ပြောင်းတဲ့လေသံနဲ့အတူ ကျွန်တော့်လက်မောင်းနားကအင်္ကျီစကိုလှမ်းဆွဲပြီး မေးလိုက်တဲ့သူ့ အသံကြောင့် ဘေးနားမှာ သူတစ်ယောက်လုံးထိုင်နေခဲ့တယ်ဆိုတာ သတိရလိုက်မိပါတယ်။ ကြည့်စမ်း၊ သူ့ တစ်ယောက်လုံးကိုဘေးနားမှာထားပြီး ကျွန်တော်တွေးချင်ရာတွေကို လျှောက်တွေးနေခဲ့မိတော့တာ။
“ခုနက ကိစ္စမှာ နင့်ကိုအရှက်ခွဲလိုက်သလိုဖြစ်သွားရင် ငါတောင်းပန်တယ်နော်”...
ခပ်ဖျော့ဖျော့လေသံနဲ့ ထပ်ပြောလိုက်တဲ့ သူ့ရဲ့စကားသံလေးကိုအကြားမှာ ကျွန်တော်မနေနိုင်တော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်သူ့အပေါ်မှာ ချစ်သလောက်၊ သူလည်းကျွန်တော့်အပေါ်မှာ သံယောဇဉ်ကြီးတာကို ကျွန်တော်သိ ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် စောစောကကျွန်တော်နေနေတဲ့အနေအထားအတိုင်းကနေ စတီယာရင်ပေါ်မှာအပ် ထားတဲ့မျက်နှာကို သူ့ဘက်စောင်းလှည့်လိုက်ပြီး တစ်ချက်ငေးကြည့်မိလိုက်တယ်။ ဆံပင်ရှည်ရှည်လေးတွေ ကြားကသူ့မျက်နှာလေးပေါ်မှာ နောင်တအရိပ်အငွေ့တွေယှက်ဖျာနေတာကို တွေ့လိုက်ရတော့ မပွင့်တပွင့် လေသံနဲ့ “ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟာ” လို့ပြန်ပြောမိလိုက်တယ်။
အဲ့ဒါကို သူကခေါင်းကိုအသာယမ်းခါတယ်။ ပြီးတော့ အေးစက်စက်လေသံနဲ့ ကျွန်တော့်ကိုမေးတယ်။
“နင်ငါ့ကို အဲ့ဒီကောင်နဲ့ တကယ်ချစ်သွားစေချင်တာလား...ကိုထူး”....
ကျွန်တော် ခေါင်းကိုခပ်သွက်သွက်ရမ်းပြလိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်အတွက် အဆိုးရွားဆုံးသောမေးခွန်းမို့ပါပဲ။ အသံကိုကြားရတာနဲ့တင် ရင်ထဲမှာခါးသီးမိတယ်။ အကူအညီတောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို အားနာတတ်တဲ့ အကျင့်ဆိုးကြောင့် သူ့ကိုပြောပေးရုံကလွဲလို့ ကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူ့ကို ဘယ်လိုလူမျိုးနဲ့မှ ချစ်သူတွေဖြစ်မ သွားစေချင်ပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်သာ သူ့ရဲ့ချစ်သူအဖြစ်နဲ့ နွေဦးမှာကြွေလူးမယ့်ရွက်ကြွေ တွေကို အတူတူရေတွက်ကြည့်ခွင့်ရချင်မိတာပါ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ခေါင်းခါပြတာကို အရေးမစိုက်သလိုပုံစံမျိုးနဲ့ လက်ကာပြပြီး သူကဆက်ပြောတယ်...။
“ဟုတ်ပါတယ်...၊ နင်ငါ့ကို လူတကာနဲ့လိုက်ပြီးအောင်သွယ်လုပ်ပေးနေတာအကြောင်းတစ်ခုခုရှိရမယ်လို့ ငါ စဉ်းစားမိနေတာကြာပြီ။ ဒါပေမယ့်အခုတော့ ငါနည်းနည်းရိပ်မိသလိုရှိလာပြီ။ နင်နဲ့ငါက...... အမြဲတတွဲတွဲဆို တော့ နင်ချစ်တဲ့မိန်းကလေးတွေနဲ့ ....ဆုံဖို့အခွင့်အလမ်းနည်းနေလို့ နင့်ဘေးနားကနေငါထွက်သွားရအောင် တွေ့ကရာလူနဲ့ လိုက်အောင်သွယ်ပေးနေတာမဟုတ်လား”....
သူ့စကားသံတွေက ကျွန်တော့်ရင်ကိုအရှိန်ပြင်းပြင်းထိုးနှက်လိုက်သလိုပါပဲ။ လွဲလိုက်တာ။ ကျွန်တော်သိပ် ချစ်ရတဲ့သူ့ကို ဘေးနားကနေထွက်သွားအောင်လုပ်ဖို့မပြောနဲ့၊ ကျွန်တော်သာ သူ့ဘေးနားကနေလွင့်ထွက် သွားရမှာစိုးလို့ အချစ်တွေကို ဒီရင်ဘတ်တစ်ခုလုံးပြည့်လျှံနေတာတောင်မှ မျိုသိပ်စွာသိုဝှက်ထားခဲ့ရတဲ့ ဒီလူ ကိုများ။
ခုချိန်မှာ ကျွန်တော်သူ့ကို တစ်ခုခုပြောလိုက်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဘာကိုပြောရမှန်းမသိဖြစ်နေတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုကိုမက်နေရသလိုပဲလေ။ အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာကို သူကကြည့်ပြီးဆက် ပြောတယ်။
“ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား...ကိုထူး။ အေး...ဒါဆိုငါကလည်း အလိုက်သိရတော့မှာပေါ့။ အဲ့ဒီ ကိုသက်ကိုပြော လိုက်၊ နက်ဖြန်သင်တန်းဆင်းချိန်ကျရင် ကန်ဘောင်မှာငါ့ကိုစောင့်နေလို့။ ငါနဲ့တွေ့မှ ပြောချင်တာတွေကို ပြောတော့...၊ ကြားလူကနေ တစ်ဆင့်ခံပြောမနေနဲ့တော့လို့။ ပြီးတော့ ငါလည်း...ဆက်ဆက်ရောက်အောင် လာခဲ့မယ်လို့”.....
သူ့ရဲ့စကားသံတွေက ကျွန်တော့်ရဲ့နားထဲမှာကြယ်တွေကြွေကျသွားတဲ့အတိုင်းပဲ။ တိုးတိုးတိတ်တိတ်နိုင် လွန်းလှစွာနဲ့ မြည်ဟည်းလောင်ကျွမ်းသွားခဲ့ရတယ်။ ဒီစကားဟာ အရွဲ့တိုက်ခြင်းတွေစွက်ဖက်နေခဲ့လေ မလားလို့ ယောင်ယောင်ကမ်းကမ်းနဲ့ သရုပ်ခွဲကြည့်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာတော့ ထိခိုက်ခံစား သွားရတာ ရစရာတောင်မရှိတော့ပါဘူး။ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကလည်း ကျွန်တော်ပဲလေ၊ ကိုယ့်အပြစ်နဲ့ကိုယ် ကိုး။ အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ ခေါင်းငုံ့ငြိမ်သက်နေလိုက်ရုံကလွဲပြီး ကျွန်တော်ဘာများတတ်နိုင်ဦးမှာလဲ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှရှိနေတဲ့ကမ္ဘာ့လေထုရဲ့ဖိအားတွေ များသွားသလား......၊ နည်းနေခဲ့သလား ဆိုတာကို သေချာမသိပေမယ့် ရင်ထဲမှာတော့ မွန်းကျပ်မှုတစ်ခုကိုခံစားနေခဲ့ရတာ အမှန်ပါပဲ။ စိတ်အာရုံ ထဲမှာအုံကျင်း၊ ဖွဲ့သိုင်းနေခဲ့တဲ့ ၀ိုးတ၀ါးအတွေးတွေရဲ့ပူလောင်မှုက ကျွန်တော့်ရင်ကိုကူးစက်လောင်ကျွမ်း နေစေခဲ့ပြန်တယ်။ တမြည့်မြည့်နဲ့ပေါ့။ အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ ရှေ့မှာရှိတဲ့အင်းလျားရေပြင်ကို ဖြတ်သန်းတိုက်ခတ် လာတဲ့လေပြေတောင်မှ ကျွန်တော့်ရဲ့ရင်ကိုအေးမြသွားစေဖို့ မစွမ်းဆောင်နိုင်ရှာခဲ့ဘူး။
ကျွန်တော့်ဘေးနားမှာ လောလောဆယ်သူရှိမနေခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီပတ်ဝန်းကျင်လေးရဲ့တစ်နေရာရာမှာ သူရှိနေတာသေချာတယ်။ ဒါတောင်မှ ရေအစပ်ကဒီခုံလေးပေါ်မှာတစ်ယောက်တည်း သူ့ကိုထိုင်စောင့်နေ ရင်းစိတ်ထဲမှာ သူနဲ့အဝေးကြီးဝေးသွားရတော့မလိုခံစားနေခဲ့မိရတယ်။ သူကတော့ ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်တတ်သူမို့ ဒီညနေ သင်တန်းပြီးချိန်မှာ ကိုသက်နဲ့တွေ့ဖို့ ထွက်သွားခဲ့ပြီ။
အခုလိုကျွန်တော်ဖြစ်ပျက်ခံစားနေခဲ့ရတဲ့ ခံစားချက်ဆိုးတစ်ခုဟာ ဘယ်နေရာကနေမြစ်ဖျားခံလာခဲ့သလဲဆို တာစေ့စေ့တောင်တွေးကြည့်စရာမလိုပါဘူး။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်နေခဲ့တာမို့ပါပဲ။ ကိုယ်ချစ်နေတဲ့မိန်း ကလေးတစ်ယောက်ကို လူတကာနဲ့လိုက်ပြီး မရည်ရွယ်စွာနဲ့အောင်သွယ်လုပ်ပေးမိခဲ့တဲ့ကျွန်တော့်အတွက် နောက်ကျစွာလှမ်းလာတဲ့ နောင်တတရားဟာ.......... အခုလိုအချိန်မျိုးမှာ ဘာများအသုံးဝင်နိုင်တော့မှာလဲ။ တကယ်လို့များ ကျွန်တော်ပြုခဲ့တဲ့ ဒီအပြစ်တွေအတွက် တစ်ပါးသောသူရဲ့ရင်ခွင်ထက်မှာမျက်နှာအပ်ပြီး အခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့ချစ်သူအဖြစ်နဲ့နေထိုင်သွားတော့မယ့်အပြစ်မျိုးကို သူပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ရော....၊ ကျွန် တော်ဘယ်လိုမျက်ဝန်းတွေနဲ့ကြည့်နိုင်မလဲ၊ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရော ကြေကွဲခံစားနိုင်မှာလဲ။ ဆုံးရှုံးခြင်းရဲ့ရသ ကိုရော ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ စားသုံးနိုင်မှာလဲ။ ဒါပေမယ့် သေချာတာတစ်ခုကတော့ ပြာလွင်တဲ့မိုး ကောင်းကင်အောက်က ကျွန်တော့်နှလုံးသားတစ်စုံမှာ ကြေကွဲဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့အတူ၊ လွမ်းဆွတ်ခြင်းတွေသာ တစ်သက်တာထာဝရ စွန်းပေသွားရမှာ အမှန်ပါပဲ။ ကျွန်တော်သူနဲ့ဝေးဝေးမှာ မနေနိုင်ပါဘူး။
တွေးရင်းတွေးရင်းနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့မျက်ဝန်းတစ်ဝိုက်မှာ......... ပူလောင်တဲ့စွတ်စိုမှုအချို့ကိုခံစားလာရတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူအချို့ရှိနေတာကြောင့် ရှက်ရွံ့စိတ်တစ်ဝက်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုငုံ့ကိုင်းလိုက်မိ တယ်။ ပြီးတော့ ဒူးခေါင်းပေါ်ကို တံတောင်ဆစ်နဲ့ထောက်ထားလိုက်ပြီး လက်ဖ၀ါး တွေကြားထဲမှ မျက်နှာကို ၀ှက်ထားလိုက်မိတော့တယ်။ တကယ်ဆိုရင်သူနဲ့ဝေးသွားရမှာစိုးလို့ ဖွင့်မပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့..........၊ မပြောရဲခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် နောက်ဆုံးသောရလာဒ်က ဒါမျိုးအဖြစ်တွေလည်းရှိနိုင်သေးတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော် တစ်ခါမှမတွေးဖြစ်ခဲ့မိဘူး။ တွေ့ကြုံ၊ သိမြင်ခံစားရတော့မှပဲ........ တကယ့်ကိုခါးသီးဖွယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာ သိလာရတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ဘာများတတ်နိုင်ပါဦးမလဲ...။ အခုချိန်မှာ သူတို့နှစ်ယောက် ဘယ်လိုစကားမျိုးတွေပြောနေကြပြီလဲ....။
ရုတ်တရက်ဆိုသလို ကျွန်တော့်ရဲ့အတွေးအိမ်ထဲကိုခပ်မာမာလေးဖြတ်သန်းစီးမျောလာတဲ့ သူ့ရဲ့အသံလေး ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက် ဘယ်အခါမှရိုးမသွားနိုင်တဲ့ အသံလေးလေ။
အဲ့ဒါကြောင့် ငုံ့ထားတဲ့မျက်နှာပေါ်က လက်ဖ၀ါးတွေကိုအသာဖယ်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ သည်းကြိုးသေးသေး လေးတွေနဲ့ ကတ္တီပါခင်းအနက်ရောင်ဖိနပ်ပါးပါးလေးပေါ်က သူ့ရဲ့ခြေဖမိုးဖြူဖြူလေးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ သူ ၀တ်ထားတဲ့ ခဲရောင်ထမီပျော့ပျော့ရဲ့အနားစလေးတွေက ခြေမျက်စေ့ပေါ်ပုံကျနေပြီး လေအဝှေ့မှာ ညင်ညင် သာသာ လှုပ်ခါနေခဲ့ကြတယ်။ သူဘယ်အချိန်ကတည်းက ကျွန်တော့်ရှေ့ရောက်နေခဲ့တာလဲမသိပါဘူး..........။ ဒါပေမယ့်လည်း............... အခုအချိန်မှာ ကျွန်တော်သူ့ကိုမော့မကြည့်ချင်သေးဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းထဲမှာ မျက်ရည်စတချို့ခိုကပ်ကျန်နေခဲ့သေးတာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြန်သိနေလို့ပါပဲ။
သူ့စကားကို ကျွန်တော်ထိုင်ရာကနေမထသေး၊ ခေါင်းကိုလည်း မမော့သေးပဲနဲ့ ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်ပါတယ်။ ပြန်ချင်ပြန်ကြမယ်လေ....ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ရဲ့အဲ့ဒီလိုပုံစံကို သူကအမြင်ကတ်လာခဲ့ တယ်နဲ့တူတယ်....။ သူ့ထုံးစံအတိုင်း သဟောက်သဟာ လေသံမာနဲ့ပြောပြန်တယ်။
သူ့ရဲ့အသံအဆုံးမှာ ခုံပေါ်ထိုင်ရာကနေမထဖြစ်သေးပေမယ့် ကျွန်တော်မော့ကြည့်လိုက်ရတော့တယ်။ သူ့ရဲ့ အမိန့်နဲ့ ဆန္ဒတွေကို ဘယ်သောအခါကမှ ကျွန်တော်မလွန်ဆန်နိုင်ပါဘူး။ မလွန်ဆန်ချင်ဘူးဆိုရင် ပိုပြီးတော့ မှန်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သူ့ကို သိပ်ချစ်ခဲ့တာကိုး။
မော့ကြည့်မိလိုက်တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့မြင်ကွင်းထဲမှာတော့ ဘာမိတ်ကပ်မှလိမ်းချယ်မထားပဲ နှုတ်ခမ်းလေးကိုသာချောကလက်ရောင့်ဖျော့ဖျော့လေးဆိုးထားတဲ့ သူ့ရဲ့မျက်နှာရှင်းရှင်းလေးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ အဲ့ဒီမျက်နှာ လေးက ကျွန်တော့်ရဲ့အကြည့်တွေကိုလွဲဖယ်မသွားနိုင်အောင် အမြဲတမ်းပဲ ညှို့ငင်တတ်ကြလွန်းတယ်။ ကျွန် တော်သိပ်ချစ်တဲ့အထဲမှာ တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ သူ့ဆံပင်ရှည်ရှည်လေးတွေကတော့ အဆက်မပြတ်ဆိုသ လို တိုက်ခတ်နေတဲ့လေပြေထဲမှာ ဝေ့ဝေ့၀ဲဝဲနိုင်လို့။
သူက သင်တန်းတက်တိုင်းလွယ်လာတတ်တဲ့ ကိုင်းတိုဘက်အိတ်ခပ်ကြီးကြီးကို ပခုံးမှာလွယ်ထားရင်း လက် နှစ်ဖက်ကို ခပ်တင်းတင်းပိုက်ထားပြီး အေးစက်စက်မျက်ဝန်းတွေနဲ့ မတ်တပ်ရပ်အနေအထားကနေ ကျွန်တော့်ကိုအပေါ်စီးကနေမိုးကြည့်နေတယ်။
ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းမှာ၊ မျက်တောင်တွေမှာ စိုစွတ်နေဆဲဖြစ်တဲ့ မျက်ရည်အစအနတွေကို သူမြင်သွားတယ်နဲ့ တူပါတယ်။ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကို စိုက်ကြည့်နေတဲ့ သူ့ရဲ့အကြည့်တွေကို ရုတ်သိမ်းသွားတယ်။ ပြီးတော့ မျက်နှာလေးကို ခပ်မော့မော့နဲ့ပင့်ချီထားလိုက်ပြီး တစ်ဖက်ကိုစောင်းငဲ့သွားတယ်။ သူ့နှုတ်ခမ်းလေးကိုလည်း တွန့်ရုံခပ်ထေ့ထေ့လေးပြုံးလိုက်ပြန်တယ်။
ကျွန်တော် နည်းနည်းလေးရှက်သွားတယ်။ အချစ်အတွက် မျက်ရည်ကျကြရတာ မထူးဆန်းလှပေမယ့် အခု လိုမျိုး သူလက်ပူးလက်ကြပ်မိသွားတော့ ကျွန်တော်အနေရခက်တယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် စကားမရှိစကားရှာပြီးသူ့ ကိုမေးလိုက်မိတယ်။
သူက လက်နှစ်ဖက်ပိုက်ထားတဲ့အနေအထားကနေပြီးတော့ပဲ...... ပခုံးအစုံကို အသာတွန့်ပြတယ်။ မသိဘူး ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပေါ့။ သူတို့နှစ်ယောက် ဘယ်လိုစကားမျိုးတွေပြောဖြစ်ခဲ့ကြသလဲဆိုတာ ကျွန်တော်မသိနိုင်ခဲ့ ပါဘူး။ ကျွန်တော့်မျက်စိထဲမှာ သူ့ကို အခြားတစ်ယောက်နဲ့ တွဲယှဉ်ပြီးမမြင်နိုင်လို့ဒီခုံလေးပေါ်မှာပဲ သူပြန်လာ မယ့်အချိန်အခုအချိန်ထိ ထိုင်စောင့်နေခဲ့မိတာပါ။ ဒါပေမယ့် သိချင်စိတ်ကို မထိန်းနိုင်တော့ပဲ ကျွန်တော်မေး မိလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်အသံက တုန်လှုပ်နေသလိုပဲ။ အဲ့ဒီအသံကြောင့်လားမသိဘူး။ သူ့မျက်နှာက ကျွန်တော့်ဘက်ကို လှည့်ကြည့်လာတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကိုစေ့စေ့ကြည့်ရင်း....
ကျွန်တော် ရင်ပူစွာနဲ့၊ ဟန်တောင်မဆောင်နိုင်တော့ပဲ ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်မိတော့တယ်။
“အဲ့ဒီနှာဘူးကို နောက်တစ်ခါဒီလိုစကားမျိုးတွေလာထပ်ပြောရင် သင်တန်းမှူးနဲ့တိုင်ပြောမယ်လို့ အပြတ်ပြော ခဲ့လိုက်တာ၊ သိပြီလား”....
ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ....... တစ်ခုခုကို..... လွတ်မြောက်ခွင့်ရလိုက်သလိုပဲ......။ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးသွားရတယ်။ ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ သူ့မျက်နှာလေးဟာ ဆံပင်ရှည်ရှည်ဖရိုဖရဲလေးတွေကြားမှာ ငုပ်ချည်ပေါ်ချည်နဲ့ လှပနေခဲ့ တယ်။ ကျွန်တော်သူ့ကို အတွေးထဲမှာတောင် နောက်တစ်ခါ မဆုံးရှုံးချင်တော့ပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ ရင်ဘတ်ပေါ်မှာသာ သူ့မျက်နှာလေးကို ထာဝရအပ်ထားနိုင်ဖို့အခွင့်ကိုပဲ လိုချင်နေမိတော့တယ်။
“ဒါပေမယ့် နင်သွားတာ တော်တော်ကြာတယ်”.....
ပြောဖြစ်လိုက်တဲ့ ကျွန်တော့်လေသံက စိတ်ကောက်နေသလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်။ အဲ့ဒီတော့ သူကထုံးစံအတိုင်း လေသံမာမာနဲ့
“ပြီးတော့ ဟေမာတို့နဲ့ မုန့်တီဝင်စားနေတာကိုးဟဲ့....၊ ကြာမှာပေါ့။ နေပါဦး နင့်မျက်နှာကရောစာမေးပွဲကျတဲ့ ရုပ်နဲ့ ဘာဖြစ်နေတာတုန်း”.....
ကျွန်တော့်အသံက အဖျားမှာ တုန်ခတ်သွားတယ်။ သူက ခေါင်းတစ်ချက်ဆတ်ပြတယ်။
“နင့်ကို ချစ်နေလို့၊ ဆုံးရှုံးသွားရမှာ ကြောက်နေလို့ပေါ့”...
အရဲစွန့်ပြီးပြောလိုက်ရတာမို့ ကျွန်တော့်ရဲ့အသံတွေက ကြိုးမညီတဲ့ဂစ်တာကို လက်နဲ့တို့အမှတ်တမဲ့ထိသွား တဲ့အတိုင်းပါပဲ...။ တကယ့်ကိုမညီမညာနိုင်လွန်းလှပါတယ်။ ရင်ဘတ်အောက်က နှလုံးသားတစ်စုံကလည်း ဒေါင်လိုက်လား၊ အလျှားလိုက်လားမှန်းခွဲခြားမသိနိုင်တော့လောက်အောင်ကိုပဲ သွေးတိုးနှုန်းတွေနဲ့လျှင်မြန်စွာ လှုပ်ခါနေခဲ့ရရှာတယ်။
ကျွန်တော့်စကားအဆုံးမှာ သူ့မျက်နှာကို တစ်ချက်မော့ကြည့်မိလိုက်ပါတယ်။ မျှော်လင့်ခြင်းများစွာနဲ့ရယ်ပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့မျက်နှာက ပိုပြီးတင်းမာသွားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အံကြိတ်ထားသေးသလားလို့ မရေ မရာတွေးလိုက်မိစဉ်မှာပဲ သူ့ကိုမော့ကြည့်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့မျက်နှာပေါ်က ဘယ်ဖက်ပါးဟာ ပူခနဲဖြစ်သွား ရပါတယ်။ သူ့လက်တစ်ဖက်မြောက်တက်လာတာကို ရိပ်ခနဲမြင်လိုက်ရတာမှန်ပေမယ့် ကျွန်တော် မရှောင်မိ ခဲ့ဘူး။ မရှောင်ချင်ခဲ့တာဆိုရင် ပိုပြီးမှန်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာကြေကွဲသွားတယ်။ သူ့ကိုဖွင့်ပြောခဲ့ရင် ဒီလိုပဲတုန့်ပြန်မယ်ဆိုတာကို သိထားပေမယ့်....... တကယ်တမ်းရင်ဆိုင်လာရတဲ့အခါမှာ ကမ္ဘာမြေပေါ်က ပန်းတွေအားလုံးဟာ ကျွန်တော့်အတွက် စုစည်းပြီးငိုကြွေးကြတော့တယ်။
နောက်ပြီး ကျွန်တော်အရမ်းလည်း ရှက်သွားမိတယ်။ မလှမ်းမကမ်းမှာရှိနေတဲ့ လူအချို့က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ ဖြစ်အပျက်ကို မြင်သွားကြသလားဆိုတာ မသေချာပေမယ့် ကြေကွဲစွာနဲ့ ကျွန်တော်ရှက်မိတယ်။ ကျွန်တော့် ရင်တစ်ခုလုံးလည်း ဗြောင်းဆန်လာအောင်ငိုရှိုက်လာမိသလိုပါပဲ။ ကျွန်တော်သူ့ကိုကြည့်ရင်း အသိချင်ဆုံး မေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးလိုက်မိပါတယ်။
သူက နှုတ်ခမ်းလေးကို တွန့်ရုံပဲခပ်ထေ့ထေ့ပြုံးရင်း ခေါင်းခါပြတယ်။ ပြီးတော့ ခပ်တိုးတိုးပြောတယ်....။
“ဟင့်အင်း.....ငါလည်း နင့်ကို သိပ်ချစ်တယ်”....
ရုတ်တရက်မို့ ခဏတော့ ကျွန်တော်ယောင်တိယောင်တောင်ဖြစ်သွားရတယ်။ သူပြောတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပါယ် ကို ချက်ခြင်းနားမလည်လိုက်သလိုဖြစ်သွားရပေမယ့် ရင်ထဲမှာ ၀မ်းသာခြင်းအရိပ်အယောင်တွေက တဖိတ်ဖိတ်နဲ့ ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတော့တယ်။ သူက ဆက်ပြောတယ်။
“နင့်ကို ငါလည်းချစ်နေတာ ကြာလှပြီ၊ နင့်ကဗျာစာအုပ်လေးမဖတ်ခင် ဟိုးအရင်ကတည်းကပဲ။ ဒါပေမယ့် နင် ကဖွင့်မပြောတဲ့အပြင်တစ်ခြားလူတွေနဲ့ ခဏခဏအောင်သွယ်လုပ်လုပ်ပေးနေတော့ ငါသိပ်ပြီးဒေါသ ထွက်ခဲ့ရတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ မနေနိုင်တဲ့တစ်နေ့ နင်သာဖွင့်ပြောလာခဲ့ရင်........... နင့်ကိုအပြစ်တစ်ခုခု ပေးပြီးတော့မှ ချက်ခြင်းအဖြေပြန်ပေးဖို့ ငါဆုံးဖြတ်ထားတာ....... ကြာလှပြီ..............။ ကဲ....အခုတော့ ဘယ်လိုလဲ....ကိုထူး”...
ရှက်ရိပ်သန်းနေတဲ့ မျက်ဝန်းလေးတွေနဲ့ ကျွန်တော့်ကိုမကြည့်ရဲပဲ မျက်နှာလေးကိုတစ်ဖက်ငဲ့ပြီး ခပ်ဖျော့ဖျော့ လေသံလေးနဲ့ပြောနေတဲ့ သူ့ရဲ့ပုံစံလေးကိုကြည့်ရင်း ကျွန်တော့်ရဲ့ရင်ထဲမှာ ယုံကြည်ခြင်းတွေဟာ တစ်စ,ထက်တစ်စ ခိုင်မာလာရတော့တယ်။ နောက်ဆိုရင် ကျွန်တော်သိပ်ချစ်တဲ့ သူ့ရဲ့မျက်နှာလေးကို ကျွန်တော့်ရဲ့ရင်ခွင်ထက်မှာ နားခိုစေချင်တဲ့ဆန္ဒတွေ၊ အချိန်တွေကို ကျွန်တော် ထာဝရပိုင်ဆိုင်သွားရတော့ မယ်လေ။
အဲ့ဒါနဲ့ ရှက်ရိပ်သန်းနေတဲ့ သူ့ရဲ့မျက်နှာလေးကိုတစ်စိမ့်စိမ့်ငေးကြည့်ရင်း...မွတ်သိပ်တမ်းမက်စွာနဲ့ ကျွန်တော် ပြောမိလိုက်တယ်....။
ကျွန်တော့်အသံအဆုံးမှာ သူ့ရဲ့မျက်နှာလေးက ကျွန်တော့်ဖက်လှည့်လာတယ်။ ပြီးတော့ ရှက်ပြုံးလေးပြုံးပြီး ခေါင်းငြိမ့်ရင်း ကျွန်တော့်ကိုပြန်ပြောတယ်...။
“နင်ငါ့ကို သိပ်ချစ်တာ ငါသိပါတယ်ကိုထူးရယ်။ ငါလည်း နင့်နဲ့ ထပ်တူပါပဲ”....
အဲ့ဒီအချိန်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ဟာဘာတွေဖြစ်ပျက်နေခဲ့မှန်းမသိလောက်အောင် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အကြည့်တွေဟာ ဆုံမှတ်တစ်ခုမှာ ဆုံဆည်းကြပြီး ငြိမ်သက်စွာနဲ့ ငြိမ်းချမ်းနေခဲ့မိကြတယ်။ ရေပြင်ကိုဖြတ် သန်း ပြီးတိုက်ခတ်နေခဲ့တဲ့ လေတိုးသံကိုတောင်မှ နားထဲမကြားမိတော့သလိုပါပဲ။
တော်တော်လေးကြာသွားတော့ သူက ကျွန်တော့်ဘယ်ဖက်ပါးကို သူ့လက်ဖ၀ါးလေးနဲ့ ညင်သာစွာဖွဖွလေး ကိုင်ပြီး ကြင်နာစွာနဲ့မေးတယ်။ ဂရုဏာသံလေးနဲ့ပါ။
“ခုနက ငါရိုက်လိုက်တာ တော်တော်နာသွားလားဟင်”....
ကျွန်တော် ခေါင်းကိုခပ်သွက်သွက်လေးယမ်းပြလိုက်ပါတယ်။ မျက်ဝန်းရဲ့အကြည့်တွေကိုလည်း သူ့မျက်ဝန်း ကနေပြီးလွှဲဖယ်ဖို့သတိမရမိသေးပါဘူး။ ပြီးတော့ လောလောဆယ် ရင်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့ကြည်နူးချမ်းမြေ့ မှုက ဘာနဲ့မှတောင်နှိုင်းရက်စရာမရှိဘူးလို့လဲ ထင်နေမိပါသေးတယ်။
အဲ့ဒီနောက်မှာ သူက ကျွန်တော့်ဘေးနားမှာအသာအယာဝင်ထိုင်တယ်။ ပြီးတော့ ..ကျွန်တော့်လက်မောင်း ပေါ်မှာ သူ့မျက်နှာလေးကိုအပ်ပြီး ခပ်သဲ့သဲ့လေးငြိမ်သက်နေလိုက်တာ အကြာကြီးပါပဲ။
လေပြေတွေကတော့ ခပ်တိုးတိုးတိုက်လို့....။ ။
13rd. December , 2004.
ရှင်းသင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်စာအုပ်စင်ကိုရှင်းရင်း ဟိုးတုန်းက ဗလာစာအုပ်ထဲမှာရေးထားမိတဲ့ ၀တ္တုတို လေးတစ်ပုဒ်ကိုတွေ့လိုက်လို့စက်ထဲပြန်ရိုက်ထည့်ပြီး၊ ဘလော့ဂ်ပေါ်အမှတ်တရတင်ဖြစ်လိုက်ပါတယ်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ရက်၊ တနလာင်္နေ့မနက် ၇နာရီနဲ့၂၀မိနစ်တုန်းက ရေးပြီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတွက် ဒီဝတ္တု တိုလေးကို ကျွန်တော်ရေးဖြစ်ခဲ့တာ ၆နှစ်လောက်တောင်ရှိသွားပါပြီ။ ရံဖန်ရံခါ အွန်လိုင်းမှာတွေ့ဖြစ်တဲ့မောင် နှမအချို့နဲ့ပြောဖြစ်သလိုပါပဲ။ ဟိုးးးတုန်းက ကိုယ်ရေးခဲ့တဲ့စာလေးတွေပြန်ဖတ်မိရင်၊ ရှက်သလိုလို၊ ရယ်ချင်သလိုလိုဖြစ်မိခံစားမိရတာကတော့ အမှန်ပါပဲဗျာ။
ကျွန်တော် အသက်၂၄ကျော်ကျော်လောက်တုန်းက ရေးခဲ့ဖူးတဲ့အချစ်ဝတ္တုတိုလေးကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဖတ်ပေးခဲ့တဲ့ မောင်နှမများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်လျှက်ပါ.....။
စကားမစပ်ပါပဲ။ အဆင်ပြေခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီလင့်ခ်အသစ်ကိုပြောင်းချိတ်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။ လင့်ခ်အဟောင်းက အလုပ်လုပ်တာ သိပ်ပြီး နှေးကွေးလွန်းလို့ပါ.....:D
ပုံလေးကိုတော့ ဒီနေရာလေးကနေ ယူသုံးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ...။
စာရေးသူ ~ဏီလင်းညို~ စာရေးပြီးချိန် 11:49 PM 23 comments:
“ကိုယ့်ရဲ့ ရင်ခုန်သံတွေကို မင်းမမြင်တာနေမှာပါ”....
“ရင်ခုန်သံဆိုတာ မမြင်နိုင်ဘူးလေ.....။ ကြားပဲ ကြားနိုင်တဲ့အရာမျိုးပါ...။ စပြောကတည်းက မှားနေပြီထင် တယ်နော်....၊ အဟင်း”.......
ပြောရင်းဖြင့်စကားဆုံးကာနီးတွင် မထိန်းနိုင်တော့ပဲ သူမရဲ့ရယ်သံတချို့က ကပ်ငြိပါသွား၏။ ထိုစဉ် ညဉ့်ဦး လေပြေတစ်သုတ်က သူမတို့ကိုဖြတ်သန်းတိုးဝှေ့လို့သွားသည်။ သူမရဲ့ရှည်မျောမျောဆံပင်လေးတွေ လေယူ ရာနောက်လိုက်ပါသွားကြ၏။ ထို့အတူ သူမရဲ့အသားပျော့ပျော့အင်္ကျီစများကလည်း လေထဲတွင် တဖျပ်ဖျပ် အသံပေးကာ လူးလွန့်လှုပ်ခါလျှက်.....။
ညခုနှစ်နာရီခန့်ရှိသေးသော်လည်း သူမတို့နေသော လမ်းသွယ်လေးထဲတွင် လူရှင်းနေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် လမ်းထိပ်ရှိစာအုပ်ဆိုင်တွင် ငှားထားသောမဂ္ဂဇင်းများပြန်ပို့ရန် အိမ်မှတစ်ယောက်တည်းထွက်လာခဲ့သော သူမကို သူရိန်တစ်ယောက် လွတ်လွတ်လပ်လပ်စကားလိုက်ပြောခွင့်ရနေခြင်းဖြစ်၏။
သူရိန်ဆိုတာ အခြားသူတော့မဟုတ်....။ သူမတို့နေသော လမ်းထဲမှဖြစ်သည်။ အိမ်ချင်းအနည်းငယ်သာ လှမ်းဝေး၏။ လူချင်းလည်း မျက်မှန်းတန်းမိရုံရင်းနှီးပါသည်။ သို့သော် သူငယ်ချင်းများမဟုတ်ခဲ့ပါ..။ ထို့အတူ သူရိန်တို့မိသားစုက သူမတို့နေသောလူလတ်တန်းစားဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက်လေးထဲသို့ နောက်ကျမှပြောင်းလာ ခဲ့တာလည်းပါသည်။
သူမစကားကြောင့်ထင်သည်။ သူရိန်က သူမမျက်နှာကို ခပ်ဆွေးဆွေးငဲ့ကြည့်ရင်း.....
“ထားပါတော့လေ....၊ ကိုယ်ဘာမှ ဆက်မပြောတော့ပါဘူး....။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်မင်းအပေါ်မှာ ဘယ်လောက် ထိချစ်ခဲ့သလဲ..၊ ပေးဆပ်ခဲ့သလဲဆိုတာတွေကိုတော့ မင်းတစ်ချက်လောက်တော့ ငဲ့ကြည့်သင့်ပါတယ်”.......
ဒီတစ်ခါတော့ သူရိန့်ကိုငဲ့ညှာစွာဖြင့် သူမဘာမှ ပြန်မပြောဖြစ်တော့....။ သို့သော် သူမရင်တွင်းထဲမှ သူရိန့်ကို တီးတိုးမေးခွန်းတစ်ခု မေးနေမိလိုက်သည်။ သူရိန်ဘာတွေလာပြောနေတာလည်း....ဟု။ ထို့အတူသူမရဲ့ နှုတ်ခမ်းအစုံကလည်း မရည်ရွယ်စွာဖြင့် ခပ်လွန့်လွန့်လေးပြုံးနေမိခဲ့၏။
မိန်းမတစ်ယောက်ကို (သူမကို) အရူးအမူးချစ်နေတယ်ဆိုတာနှင့် သူရိန့်အပေါ်တွင် သူမပြန်ချစ်သင့်သလား ဟုလည်း ပြန်တွေးနေလိုက်မိပြန်သည်။ နောက်ပြီး သူရိန့်ပြောစကားထဲတွင်ပါသော ပေးဆပ်ခြင်းဆိုတာ...။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက် အချိ်န်ကုန်ခံကာ......... နောက်ကနေတစ်ကောက်ကောက်လိုက်နေတတ် တာဟာ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စစ်မှန်သောပေးဆပ်ခြင်းတဲ့လား.....၊ အချိန်တိုင်းလိုလို.... မြင်သာ သောနေရာတိုင်းတွင်ရှိနေတတ်တာလည်း ပေးဆပ်ခြင်းလို့ခေါ်သလား....၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် အိမ်ရှေ့မှာ...ခဏ ခဏဖြတ်ပြီး လျှောက်တတ်တာမျိုးကိုခေါ်သလား.....။ ညတိုင်း သူမအိမ်နှင့်မလှမ်းမကမ်းနေရာတွင် ဂစ်တာ တီးပြီးသီချင်းဆိုပြတိုင်း ပြန်ချစ်ရမည်တဲ့လား...။ ထိုအတိုင်းဆိုလျှင်........ သူမအတွက် ရည်းစားတော်တော် များများအဖတ်တင်နေလောက်ပြီ....။ သို့သော် ပေးဆပ်ခြင်းဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို သူမလည်း.....ကောင်းစွာ မခွဲခြားတတ်သေးပါ။
“မေးပါ....၊ တစ်ခုမဟုတ်ဘူး....။ သစ္စာသာမေးမယ်ဆိုရင် အကုန်ဖြေမယ်”......
“တစ်ကယ်လို့များ.....သူရိန့်ကို သစ္စာပြန်မချစ်ရင် သူရိန်ဘာဖြစ်သွားမလဲ...။ မဖြေချင်လည်းရတယ် နော်....၊ သစ္စာက သိချင်ရုံသက်သက်ပါ”.......
သူမအမေးကို သူရိန်က အသက်ရှုသံပြင်းပြင်းစွက်လျှက်.....
“ကိုယ်ခုနေတော့ မပြောပြတတ်သေးဘူး....၊ တစ်ခုခုဖြစ်သွားမှာတော့ သေချာတယ်....၊ ကြေကွဲသွားရမှာ တော့ အမှန်ပဲလေ”......
နားထောင်ရင်း သူမပြုံးလိုက်မိသည်။ သူရိန်တစ်ယောက် သူမ၏မေးခွန်းကို ရေရေရာရာမဖြေနိုင်တာ မို့ဖြစ်၏။
“ဒါဆို အခုလက်ရှိ သူရိန်တွဲနေတဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်ရော”.....
သူမအမေးကြောင့် သူရိန့်ခန္ဓာကိုယ် ဆတ်ခနဲဖြစ်သွားသလိုရှိ၏။ ထို့နောက် သူရိန့်ထံမှ ရုတ်တရက် ဘာသံမှ ထွက်မလာနိုင်ခဲ့.....။ ဧကန္နသူရိန်တစ်ယောက် သူ့အကြောင်းတွေကို သူမသိနေတာအံ့သြနေပြီ ထင်သည်။ ဟုတ်သည်...၊ သူရိန့်ကြောင်းတွေကို သူမသိ၏။ တစ်လမ်းတည်းနေတာက တစ်ကြောင်း၊ နောက်ပြီး ရုပ်ချောချော၊ ခပ်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြင့် သူရိန့်အကြောင်းက လမ်းထဲမှမိန်းကလေးများနေ့တိုင်း ပြောချင်စရာ၊ စိတ်ကူးယဉ် ချင်စရာခေါင်းစဉ်တစ်ခုမို့ပင်ဖြစ်၏။ ထို့အတွက် သူရိန့်အကြောင်းများ သူမ နားထဲကိုရောက်လာခဲ့တာ သိပ်ပြီးတော့မဆန်းလှပါ။
သူရိန့်အကြောင်းများကို သူမအနေဖြင့် တမင်တကာနားစွင့်မနေမိသော်လည်း သူရိန်ဆံပင်ပုံစံ အသစ် ပြောင်းလိုက်သည်ကအစ၊ လမ်းထဲသို့ သူ့ပြိုင်ဘီးနီနီလေးဖြင့် အရှိန်ပြင်းစွာ ဘယ်လိုနင်းဝင် လာတတ်သည် အဆုံး တစ်ဆင့်စကားဖြင့် အမြဲလိုလိုသိနေခဲ့ရလေသည်။ ထိုကဲ့သို့သော သတင်းများနှင့် ရည်းစားများတတ် သော သူရိန်က သူမကို စွဲလန်းစွာ ချစ်နေခဲ့သည်တဲ့....။ ဒီသတင်းကို ကြားတုန်းက သူမကိုယ့်နားကိုယ် တောင်ပြန်ပြီးမယုံချင်....။ ဘာရယ်ကြောင့်မှတော့မဟုတ်.....၊ သူမနှင့် သူရိန်က ဆန့်ကျင်ဘက်မျဉ်းနှစ် ကြောင်းလို ကွာခြားလွန်းနေခဲ့တာမို့ဖြစ်၏။
သူမက အေးဆေးတည်ငြိမ်သလောက် သူရိန်ကတက်ကြွဆူပူလွန်းသည်။ သူမက ပညာရေးကိုအလေးထား သလောက် သူရိန်က ဒီခေတ်မှာ ပညာမတတ်လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာ...ဟုကြွေးကြော်တတ်သူ....။
သူမခြေလှမ်းတွေကို အရှိန်နည်းနည်းမြှင့်လိုက်မိသည်။ လမ်းထိပ်ကိုရောက်ကာနီးနေပြီမို့ဖြစ်၏။ သူမရဲ့ခြေ လှမ်းတွေကို မှီအောင်လိုက်ရင်း အသက်ရှုသံခပ်ပြင်းပြင်းစွက်လျှက် သူရိန်ကပြောသည်။
“အဲ့ဒါတွေက အပျော်တွဲတာပါ.....၊ သူတို့မရှိလို့ ကိုယ့်ဘ၀က ဘာမှဖြစ်မသွား”......
သူရိန့်စကားမဆုံးခင် သူမကြားဖြတ်ဝင်ကာခေါ်လိုက်တာမို့ သူရိန်က အထိတ်တလန့်ဖြင့် ကြည့်လာသည်။ သူရိန့်ကိုသွေးအေးစွာကြည့်ရင်း....
“အဲ့ဒီကောင်မလေးနေရာမှာ သူရိန့်ရဲ့သွေးချင်းထဲကတစ်ယောက်လို့ မြင်ယောင်ခံစားကြည့်လိုက်ပါ....၊ အဲ့ဒါ ဆိုရင် သူရိန့်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေမလဲ....။ ခံစားရမလဲ”.....
လမ်းမဆီသို့ဖျာဆင်းနေသော မီးတိုင်မှအလင်းရောင် တစ်စွန်းတစ်စ,အောက်တွင် သူရိန့်မျက်နှာက ယိုယွင်းစွာဖြင့်.....။ သူမတစ်ချက်ငဲ့ကြည့်ရင်း ဆက်ပြောမိသည်။
“နောက်ပြီး သူရိန်တစ်ခုကိုသေသေချာချာမှတ်ထားစေချင်တယ်.....။ သစ္စာအနေနဲ့ သူရိန့်ကို ဘယ်လို နည်းနဲ့မှပြန်ချစ်လာနိုင်မယ် မထင်ဘူး...။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ သစ္စာရဲ့ရင်ထဲမှာ သူရိန့်အတွက် နေရာ မရှိတာကိုယ့်ကိုယ်ကို သေချာနေလွန်းလို့ပါပဲ.....။ အဲ့ဒါကြောင့် သူရိန့်အတွက် အချိန်ကုန်တာပဲ အဖတ်တင် နေပါလိမ့်မယ်...။
ပြီးတော့ သူရိန်နဲ့ သစ္စာတို့ရဲ့အနေအထားတွေကလည်း ကွာခြားလွန်းလှပါတယ်...။ အရှေ့နဲ့အနောက် လိုပါပဲ .....။ အနားသတ်မညီနိုင်မယ့် တြိဂံတစ်ခုကို သစ္စာရေးဆွဲဖို့ဝါသနာမပါသလို စိတ်ကူးလည်း မယဉ်တတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် တကယ်လို့ စိတ်ကူးယဉ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တောင်မှ မဖြစ်နိုင်တာတွေကို ဘေးဖယ် ထားမိမယ်ထင်ပါတယ်သူရိန်”....
စကားအဆုံးတွင် သူမခြေလှမ်းတွေကို ခဏတာရပ်တန့်ပစ်လိုက်သည်။ လမ်းထိပ်ရောက်ဖို့ သိပ်မလိုတော့ တာမို့ပင်ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် သူရိန့်ခြေလှမ်းတွေလည်း ရပ်တန့်သွားရလေတော့သည်။ လမ်းထိပ်ဖက်ဆီသို့ လှမ်းမျှော်ကြည့်လိုက်ရင်း သူရိန့်ကို တစ်ချက်ကြည့်မိလိုက်သည်။ သူမ၏ အကြည့်များထဲတွင် သူရိန့်ရဲ့ ပုံစံက ဆွဲဆောင်အားပြင်းနေခဲ့သေးသလိုလို....။ သူမခေါင်းတစ်ချက်ယမ်းပစ်လိုက်မိသည်။
သူရိန်က တိုးခတ်စွာမေးလာသည်။ သူမ၏ ခေါင်းယမ်းလိုက်သည့်အမူအယာကြောင့်ထင်၏။ ထို့ကြောင့် သူ မခေါင်းကို တစ်ခါထပ်ရမ်းလိုက်ရင်း.....
“ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး သူရိန်....၊ ကဲ...သစ္စာသွားတော့မယ်နော်....။ လမ်းထိပ်ရောက်တော့မှာ မို့လို့ပါ”....
သူရိန်က ခေါင်းငြိမ့်ပြသည်။ လမ်းမီးရောင် ခပ်သဲ့သဲ့အောက်တွင် သူရိန့်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရင်း ဖြူစင်စွာဖြင့် သူမပြုံးပြမိလိုက်၏။
“အခု သစ္စာရဲ့နောက်ကနေ ကပ်လိုက်မလာပါနဲ့နော်....။ မလိုအပ်ပဲနဲ့ သစ္စာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့အကြောင်းတွေ ကိုဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ မပျံ့နှံ့စေချင်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပြောတာပါ။ တစ်ခြားဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့မှ မဟုတ် ပါဘူး။ သူရိန့်ကို သစ္စာခင်ပါတယ်”......
ပြောပြီး မျက်လုံးအကြည့်ဖြင့် နှုတ်ဆက်ပြီး သူရိန့်ရှေ့မှသူမနေထွက်လာမိသည်။ ညဉ့်ဦးလေပြေက ခပ်တိုး တိုးတိုက်ခတ်လာပြန်လေသည်။ မျက်နှာပေါ်ကို လာရောက်ထိမှန်သော ဆံပင်ရှည်ရှည်အချို့ကို အသာ အယာ ဖယ်ရှားလိုက်ရင်း နောက်သို့ မသိမသာတစ်ချက်ငဲ့ကြည့်ဖြစ်၏။ သူရိန်တစ်ယောက် သူမနောက်သို့ ဆက်လိုက်မလာတော့ပါ။ သူမထပ်ကာ ကြိတ်ပြုံးလိုက်မိပြန်သည်။
“ကိုယ်နဲ့ စရိုက်မတူတဲ့ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကို နောက်ပိုင်းမှာ ငါပြုပြင်ကြည့်မယ်”ဆိုပြီး ရူးရူးမူးမူးချစ် တတ်သော စွန့်စားခြင်းတစ်မျိုးကို သူမသိပ်အယုံအကြည်မရှိလှပါ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက် အတွက်သိပ်ကို အရေးကြီးတယ်ဟု သူမ၏ မိခင်ဖြစ်သူကတော့ ရံဖန်ရံခါပြောပြတတ်သည်။
အတွေးနှင့်အတူ သူမဆက်လျှောက်နေခဲ့၏။ လမ်းထိပ်သို့ရောက်သောအခါ ပတ်ဝန်းကျင်က ရုတ်တရက် ဆူညံစွာ သက်ဝင်လာခဲ့သလိုဖြစ်လာသည်။ ညသည် လတ်ဆတ်စွာ နုပျိုသက်ဝင်နေဆဲ။ ထို့အတူ သူမ၏ နှလုံး သားတစ်စုံသည်လည်း အစွန်းအထင်းကင်းမဲ့လွန်းစွာဖြင့် လတ်ဆတ်နုပျိုစွာ ရှင်းသန့်နေခဲ့ဆဲ...။
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အတွင်းသို့ သူရိန်လှမ်းဝင်လိုက်သောအခါ သူငယ်ချင်းများက သူတို့ထိုင်နေသော စားပွဲဝိုင်းမှနေပြီး ၀မ်းသာအားရအော်ခေါ်ကြသည်။ ဆံပင်ကို တစ်ချက်သပ်တင်ကာ ခြေလှမ်းကျဲကျဲဖြင့် ထိုစားပွဲဝိုင်းဆီသို့ သူရိန်လျှောက်သွားလိုက်၏။ ဆိုင်အတွင်းမှ အချို့သောလူများက ချောမောသန့်ပြန့်နေခဲ့ သော သူ့ကို အားကျသလို ၀ိုင်းကြည့်နေကြတာကိုလည်း သတိထားမိလိုက်သေးသည်။
စားပွဲဝိုင်းတွင် ခုံပုလေးကိုဆွဲကာဝင်ထိုင်လိုက်တော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က....
“ဘယ်လိုလဲ...သူရိန်....။ ဒီညမင်းရဲ့ အရေးတော်ပုံအောင်ခဲ့ပြီလား”.....
စိတ်ဝင်တစားမေးလိုက်သော အသံကြောင့် သူရိန်နှုတ်မှ ဟက်ခနဲတစ်ချက်ရယ်လိုက်မိသည်။ ထို့အတူ စော စောက သူ့ကို ချိုသာသောစကားများဖြင့်နှိပ်ကွပ်ကာထားခဲ့သော သစ္စာရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ယောင်လာမိပြန် ၏။ ကျန်သောသူငယ်ချင်းများရဲ့မျက်နှာများကလည်း စိတ်ဝင်စားမှုများဖြင့်ရုတ်ရုတ်သဲသဲနိုင်လွန်းလှစွာဖြင့်။
သူရိန်ခေါင်းယမ်းပြလိုက်သည်။ ထိုအခါ သူငယ်ချင်းများထံမှ အသံပေါင်းစုံထွက်လာလေတော့သည်။ ပြီး တော့ ပြောကြသည်မှာ တစ်ယောက်တစ်ပေါက်....။ စကားများအားလုံး သူရိန့်နားထဲသို့မ၀င်ပါ။ ထို့ကြောင့် လက်ကာပြလိုက်ပြီး....
“တိတ်ကြစမ်းကွာ....၊ ထားလိုက်တော့ အဲ့ဒီကိစ္စကို။ ငါက ရမလားလို့ လိုက်ကြည့်တာပါပဲ။ စီးရီးယပ်စ်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီမှာ မင်းတို့မှတ်ထား။ ငါ့ကို ကြိုက်တဲ့မိန်းမတွေမှ အများကြီးပဲ။ အဲ့ဒီထဲက ငါကြိုက်တာကို ရွေးရုံပဲ။ သစ္စာဆိုတဲ့ တစ်ယောက်ကို လိုက်ခဲ့တာလည်း ငါ့ကိုပြန်ကြိုက်နိုင်မယ်ထင်လို့ပဲ။ ဒါပေမယ့် သူက ငါ့ကိုမခံစားနိုင်ဘူးဆိုတော့လည်း ငါ့အတွက် နောက်တစ်ယောက်ပြောင်းရုံပေါကွာ....။ လောကကြီးထဲမှာ မိန်းမဆိုတာ သူတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ အခြားလူတွေထက်တောင်မှ ငါ့အတွက်က ပေါပါသေး တယ်။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်”.....
ပြောရင်း သူရိန်ကခေါင်းကိုမော့ကာရယ်၏။ ဒီစကားသည် သူရိန့်ရင်ထဲမှ............ တကယ်လာသောစကား ဖြစ်သည်။ ထို့အတွက် သူရိန့်အကြောင်းကိုသိနေကြသော သူငယ်ချင်းများကလည်း အတူတူလိုက်ရယ်ကြ လေတော့၏။ ရယ်သံများဖြင့် သူတို့စားပွဲဝိုင်းလေးက အနည်းငယ်ဆူညံစွာကျယ်လောင်သွားရသည်။
ထိုစဉ် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှ ဖွင့်ထားသောသီချင်းလေးတစ်ပုဒ်က မတိုးမကျယ် လွင့်ပျံ့လာတာကို သူရိန်တစ်ယောက်ကြားလိုက်ရလေတော့၏။ ။
ထပ်တူညီသော ချစ်ခြင်းများ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ...။
စာရေးသူ ~ဏီလင်းညို~ စာရေးပြီးချိန် 11:09 PM 22 comments:
တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သလိုရှိနေခဲ့လေသော ညဉ့်နက်ချိန်တစ်ခုထဲတွင် ကြယ်ကလေးများကတိုးခတ်စွာ လင်းလက်နေခဲ့ကြ၏။ ညသည် နှင်းရည်စက်များဖြင့် စိုလက်နေခဲ့သလိုရှိနေခဲ့ပြန်လေသည်။ ထို့အပြင် မှုန်ဖျ ဖျဖြင့် ကြိတ်ကာတိုက်ခတ်တတ်လေသော ညဉ့်လေပြေအချို့ကြောင့် ရံဖန်ရံခါအချိန်များတွင်မူ ညက ငိုက် မြည်းနေရာမှ ခေါင်းထောင်ကာ ကြည့်တတ်ပြန်သေး၏။
တောင်စောင်းတစ်လျှောက်ကို ပတ်ကာယက်ဖောက်ထားခဲ့သော တောင်တက်မြေနီလမ်းမလေးပေါ်တွင် သူ တစ်ယောက်တည်းဖြည်းညင်းစွာဖြင့် လျှောက်လှမ်းနေခဲ့မိသည်။ ကောင်းကင်မှ မှိန်ပြပြကြယ်က လေးများ၏ ပံ့ပိုးမှုတစ်ခုဖြစ်သော အလင်းရောင်ငယ်လေးများကြောင့် သူ့ရှေ့မှ ကွေ့ကွေ့ကောက်ကောက်နိုင်လွန်းနေခဲ့ သော လမ်းကလေးကိုေ၀၀ါးခြင်းအနည်းငယ်စွက်လျှက်မြင်တွေ့နေခဲ့ရ၏။ သူ၏ဘေးတစ်ဖက်ခြမ်းတောင် နံရံစောင်းတစ်လျှောက်တွင်အလေ့ကျပေါက်ပင်လေးများရှိသည်။ ထို့အတူ ရိုးသားစွာပွင့်လန်းဖျာတတ်သော တောပန်းပင်ကလေးများလည်းရှိသေးသည်။ သူ၏ညာဖက်လမ်းအစွန်ဖက်တွင်မူ ခပ်နက်နက်လျှိုမြောင်များ၊ ချောက်များက အစဉ်အမြဲလိုလို ယှဉ်တွဲကာလိုက်ပါနေခဲ့သလိုရှိခဲ့ကြ၏။
ထို့ကြောင့် တောင်ပတ်မြေနီလမ်းလေးတစ်လျှောက်တွင် သူလျှောက်လှမ်းနေမိခဲ့ရင်း ဘယ်ဖက်တောင်နံရံ ဆီမှတောပန်းကလေးများ၏ အဆင်း၊ ရနံ၊ အလေ့ကျပေါက်ပင်လေးများ၏ မာယာမဲ့သော အသွင်သဏ္ဍာန် စသည်တို့ကို ကြည်နူးနှစ်သက်စွာခံစားမိရသလို၊ တစ်ခါတရံတွင်တော့ တစ်ဖက်ခြမ်းမှချောက်နက်နက်များ ရှိရာ အမှောင်ထုဆီသို့ အမှတ်မထင်ငေးမိရင်း ခပ်ဖွဖွကျောချမ်းမိတတ်ပါသေးသည်။ သို့သော်လည်း နွမ်းလျ ၊ ယိုင်နဲ့ချင်နေပြီဖြစ်သောခြေလှမ်းများကို (ရံဖန်ရံခါတွင်)တရွတ်ဆွဲကာသယ်ဆောင်လျှက် သူဆက်လျှောက် နေမိဆဲဖြစ်ရ၏။
ဒီလမ်းကလေးပေါ်မှာ သူလျှောက်လှမ်းခဲ့တာကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သူ့ခြေ၊ သူ့လက်စသည်တို့သည် အရည် ခမ်းကာ ပိန်လှီခြောက်ကပ်နေသလိုဖြစ်နေခဲ့ရပြီ။ ထို့အတူ သူ၏ခါးသည်လည်း မတ်မတ်မထားနိုင်တော့ပဲ အတန်ငယ်ကိုင်းနေခဲ့သယောင်ရှိခဲ့ရပြီဖြစ်၏။ ကာလအတော်ကြာအောင် ဆီနှင့်ဝေးခဲ့လေသော သူ့ဆံပင် များသည်လည်း သွေ့ခြောက်စွာဖြင့် ဖရိုဖရဲ၊ ဖွာဆန်ကျဲကာ အဖြူတစ်ဝက်ရောယှက်နေခဲ့ရလေပြီ....။
ဒီလမ်းကလေးပေါ်တွင် သူ့ဘေးနားက ဖြတ်သန်းသွားလာခဲ့ကြသူအချို့၏ခေါ်သံကို နားထဲပြန်ကြားယောင် မိလာသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ခေါ်သံကြားရတိုင်း၊ အခေါ်ခံရတိုင်း နွမ်းလျနေခဲ့သောမျက်နှာဖြင့် ခပ်သဲ့သဲ့ပင် သူ ပြန်ပြုံးပြမိတတ်၏။ တကယ်တော့ သူသည်အဖိုးကြီးတစ်ယောက်မဟုတ်ခဲ့သေးပါ။ နုနယ်ပျိုမြစ်ခြင်းများ သည် သူ့ရင်ထဲမှ ပျံသန်းမသွားကြသေး။ သို့သော် သူ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာကြောင့် “အဖိုးကြီး”ဟု အခေါ်ခံ ရတာကိုလည်း စိတ်ထဲတွင်ဘယ်လိုမှမနေခဲ့ပါ။ လူတိုင်းတွင်(ကိုယ်မဟုတ်သောတစ်ဖက်သားကို) အပေါ်ယံ ရှပ်ကြည့်ပြီးကြိုက်သလိုထင်မြင်ယူဆခွင့်ရှိသည်ဟုသူထင်မိ၏။သဘာဝတရားကပေးအပ်ခဲ့သောလက်ဆောင် တစ်ခုလားတော့ သူမပြောတတ်တော့ပါ....။
လေပြေသည် တိုးညင်းစွာပင် တိုက်ခတ်လျှက်ရှိနေခဲ့သေး၏။ ကောင်းကင်တွင် ကြယ်ရောင်တို့စုံခဲ့လေ ပြီ။ အလင်းမဲ့ညတို့ ပျက်သုန်းချိန်တန်ခဲ့ပြီလားကွယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး လိပ်ပြာလှလှလေးတွေအတွက် ချိုမြမြ၀ိုင် တစ်ခွက်ကို ဖျော်စပ်ခွင့်ပေးကြပါ။ ရာသီဆိုးတွေကို ခုတ်ပိုင်းပစ်ဖို့အတွက် အက်ဆစ်ဓားတစ်လက် ဘယ်နေ ရာမှာ ရောက်နေခဲ့ပါသလဲ။ မျက်နှာဖုံးအတုတွေဟာ တစ်ခါတလေမှာ အစစ်နဲ့ခွဲခြားဖို့ ခက်ခဲလွန်းလှချည့်..။ ချိုးငှက် ဖြူဖြူလေးရဲ့အတောင်ပံတစ်စုံကို ငါ့နှလုံးသားထက်မှာ ဆင်မြန်းခွင့်ပေးပါတော့....။
တောင်တောင်အီအီတွေးတောရင်း............ဟိုဟိုဒီဒီငေးမောရင်း သူဆက်လျှောက်နေမိခဲ့လိုက်၏။ ထိုစဉ် သူနှင့်ဝေးကွာလွန်းနေဆဲဖြစ်သော တောင်ထိပ်ဖျားရပ်ဝန်းရှိ ပွဲတော်ဆီမှဂီတသံခပ်သဲ့သဲ့ကို လေပြေ တစ်ချက်အဝှေ့တွင် နားထဲကြားလိုက်မိရသည်။ ထိုအခါ သူ့ခြေလှမ်းများက တရွတ်ဆွဲသွားနေရာမှ အနည်း ငယ်သွက်လက် မြန်ဆန်သွားသလိုရှိသွား၏။ နေ အစင်းစင်း၊ လ အစင်းစင်း ၀င်ချည်ထွက်ချည်ရှိနေခဲ့သော ကောင်းကင်တစ်ခုအောက်ရှိ ဒီလမ်းကလေးထက်တွင် သူဦးတည်လျှောက်လှမ်းနေခဲ့မိသည်က ထိုပွဲတော် ဆီသို့သာဖြစ်ခဲ့ပါ၏။ ထိုကဲ့သို့လျှောက်လှမ်းနေခဲ့စဉ်တွင် ရံဖန်ရံခါဆိုသလို ဆီးနှင်းပွင့်များက ပြင်းတစ်လှည့်၊ ညှင်းတစ်လှည့်ရိုက် ခတ်တတ်ကြသည်။ မိုးစက်များကလည်း ထိုနည်းတူစွာပင် သူ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်သို့ ရိုက် ခတ်တတ်ကြသေး၏။ ပူလောင်စူးရှလွန်းသောနေရောင်ခြည်တန်းများကိုတော့ဖြင့် သူအမှုမထားခဲ့ရတော့ပြီ။
နောက်ကျောဖက်ဆီမှ ခေါ်သံကြောင့်သူလှည့်ကြည့်မိလိုက်၏။ ကြယ်အလင်းရောင်ခပ်လဲ့လဲ့အောက်တွင် သူ့ဆီသွက်လက်စွာလျှောက်လှမ်းလာနေခဲ့သော လူရွယ်တစ်ဦးကို ဝေသီသောမျက်ဝန်းများဖြင့် တွေ့လိုက်ရ သည်။ ထို့ကြောင့် ခြေလှမ်းများကို တုန့်ဆိုင်းလိုက်ကာ ထိုလူရွယ်ကိုရပ်စောင့်နေလိုက်မိ၏။ ခဏတာ အ တွင်းမှာပင် သူအနီးသို့ ထိုလူရွယ်ရောက်လာခဲ့တော့လေသည်။ အေးစက်စွာ သွေ့ခြောက်အက်ကွဲနေခဲ့ သောနှုတ်ခမ်းတို့ကို လျှာဖြင့်တစ်ချက်သိမ်းလိုက်ရင်း နှုတ်ခွန်းဆက်စကားတစ်ခွန်း သူခပ်တိုးတိုးဆိုမိခဲ့၏။
“ကျုပ်အတွက်ဆိုရင် အဲ့ဒီစကားကို ခင်ဗျားပြောစရာမလိုပါဘူးဗျာ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကျုပ်အတွက် အချိန်အခါကောင်းဆိုတာဟာ ကျုပ်လက်ထဲမှာ အမြဲရှိနေတာမို့ပဲဗျ....။ ဟဲ....ဟဲ”......
မခိုးမခန့်ရယ်သံစွက်ကာ ပြန်ပြောလိုက်သော လူရွယ်၏စကားကြောင့် သူမှင်တက်မိသလိုဖြစ်သွားရ၏။ တစ် ဦးနဲ့တစ်ယောက်တွေ့ဆုံခိုက် လောက၀တ်တရားအရ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောသည်ကိုပင်ထင်ရာပြန်ပြော လိုက်တာမို့ စိတ်ထဲတွင် အနည်းငယ်အံ့သြသွားမိခြင်းတစ်ခုရယ်သာပင်။ ကျန်တာဘာမှမရှိခဲ့။ သို့သော် လူ ရွယ့်ကို သူတစ်ချက်လှမ်းကြည့်မိလိုက်သည်။ လူရွယ်၏မျက်လုံးများသည် ကြယ်ရောင်အောက်တွင် တဖျတ် ဖျတ် လက်ပနေခဲ့လေတာကို တွေ့လိုက်ရ၏။
သူ့အကြည့်ကြောင့်ထင်၏။ လူရွယ်က ပြုံးချိုသောမျက်နှာထားဖြင့် စကားတစ်ခွန်းကို ခပ်သွက်သွက်ဆိုသည်။
“ထားပါတော့ဗျာ....၊ ကျုပ်ကလူတွေအတွေးမှား အမြင်မှားဖြစ်နေကြမှာစိုးလို့...၊ အဲ့သလိုမျိုးတွေကိုလည်း မြင်ရရင် မနေနိုင်တဲ့အကျင့်ရှိလို့ပါ....။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလမ်းမှာခင်ဗျားနဲ့အတူတူခရီးသွားဖော်ဖြစ်ရမှာကို တော့ဝမ်းသာမိပါတယ်...။ နေပါဦး....ခင်ဗျားလည်း ပွဲတော်ဆီကို သွားမှာပဲမဟုတ်လား”.....
ခပ်တိုးတိုးပြန်ဖြေရင်း ခြေတစ်လှမ်း သူစတင်လှမ်းလိုက်မိခဲ့တော့သည်။ ထိုအခါ လူရွယ်ကလည်း သူ့နံဘေး နားမှနေ လိုက်ပါယှဉ်တွဲလျှောက်နေခဲ့တော့၏။ လူရွယ့်ကို ငဲ့စောင်းကာတစ်ချက်ကြည့်မိရင်း သူ့စိတ်ထဲ တွေးမိလိုက်သည်။ “အများကို စိတ်ချမ်းသာစေချင်ရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်စိတ်ချမ်းသာအောင် နေတတ်ရမည်၊ အများကို ကောင်းစေချင်လျှင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကောင်းအောင်အရင်နေထိုင်ကျင့်ကြံရမည်”.....ဆိုသော သ ဘောတရားတစ်ခုကိုသာဖြစ်ပါ၏။ ထို့ထက်ပိုစွာ......သူဆက်မတွေးတတ်တော့ပါ။
တိတ်ဆိတ်ခြင်းက သူတို့နှစ်ယောက်ကြားတွင် တခဏမျှကြီးစိုးသွားခဲ့၏။ တစ်ဦးအသက်ရှူသံကိုပင် တစ်ဦး က ပြန်ကြားနေရပါသည်။ အတန်ကြာတော့ လူရွယ်က စကားစဆို၏။
“တစ်ကယ်တော့ ပွဲတော်မှာနွှဲပျော်ရမဲ့အရသာဟာ ဘာလည်းဆိုတာ ကျုပ်သိပ်သိချင်လှတယ်ဗျာ။ ဘာဖြစ် လို့လည်းဆိုတော့ ကျုပ်သူငယ်ချင်းအတော်များများကပြောကြတယ်၊ ကျုပ်သာပွဲတော်ထဲကို ရောက်သွားရင် အရင်ရောက်နှင့်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံး ငုပ်လျှိုးသွားနိုင်တယ်တဲ့လေ။ ပြီးတော့ ကျုပ်ကိုယ်ကျုပ်လည်း ယုံ ကြည်မှုအပြည့်အ၀ရှိတယ်ဗျ။ ဒီမှာကြည့်ပါလား ကျုပ်ဝတ်ထားတဲ့ ၀တ်ရုံကို၊ ဘယ်လောက်များ ခမ်းနား လိုက်သလဲလို့”......
ပြောပြောဆိုဆိုဖြင့် လူရွယ်က သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို တစ်ပတ်လှည့်ပြ၏။ ဟုတ်သည်၊ လူရွယ်ပြောသလိုပင်ဝတ် ရုံက ဆန်းပြားလှချေ၏။ အရောင်သွေးစုံ ကျောက်သံပတ္တမြားတို့သည် အောက်ခံဖျင်စပေါ်တွင် သူ့နေရာ နှင့်သူ လှပစွာလက်ဖျာနေခဲ့ကြ၏။ အောက်ခံဖျင်စမှာလည်း မြင်ရုံဖြင့်အမျိုးအစားကောင်းပြီး အဖိုးထိုက် တန်ပုံပေါ် လွင်နေခဲ့သေးပါသည်။ ပုံစံမှာလည်း အများသူငါတို့နှင့်မတူ..။ အတော်ပင် ခပ်ဆန်းဆန်း နိုင်လွန်း လှ၏။
“ဟုတ်ပဗျာ....။ တယ်ဟုတ်တဲ့ ၀တ်ရုံပဲဗျ”.....
အံ့သြစွာဖြင့် သူချီးမွမ်းမိလိုက်သည်။ သူ့စကားကြောင့် လူရွယ်ကကျေနပ်ညွှတ်နူးစွာပြုံးရင်း သူ့ကိုမေးလေ ၏။
“ခင်ဗျားကရော ဘာလုပ်ဖို့ပွဲတော်ကို သွားချင်ရတာလဲဗျ”....
“ကျုပ်ကတော့ ပွဲတော်မှာတီးမှုတ်ကြမယ့်ဂီတသံစဉ်တွေကို သေချာနားထောင်ကြည့်ချင်လို့ရယ်၊ နောက်ပြီး အဲ့ဒီသံစဉ်တွေကိုမှတ်သားခဲ့ပြီး ဒီကအပြန်မှာ ပွဲတော်ကိုရောက်အောင်မလာနိုင်ကြသူတွေကိုပြန်တီးပြချင်မိ လို့ရယ်...စတာတွေအတွက် သက်သက်ပါပဲဗျာ..။ ဂီတဆိုတာ လူတွေရဲ့နှလုံးအိမ်ထဲမှာ သိသိသာသာရော မသိမသာရော စိမ့်ဝင်နစ်မြုပ်နေတတ်တဲ့အရာတစ်ခုမို့ပဲလေဗျာ”......
“အင်း.....ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် သူတို့ကိုယ်တိုင်လာဖို့ကြိုးစားသင့်တယ်လို့ ခင်ဗျားမထင်ဘူးလား။ အဲ့ဒါမှ အပြည့်အ၀ခံစားနိုင်ကြရမှာပေါ့”......
နှုတ်ခမ်းကို မခိုးမခန့်ပြုံးလျှက် လူရွယ်ကပြောသည်။ သူခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်ရင်း.....
“ဟုတ်တော့ ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ....၊ ဒါပေမယ့် အားလုံးက ပွဲတော်ကိုလာဖို့အဆင်မပြေနိုင်ခဲ့ကြသေးဘူးလေ။ လူတိုင်းဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ရှင်သန်နေရတာဆိုတော့”.....
“ဒါလည်း ဟုတ်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားပုံစံကလည်း ပွဲတော်ကိုမရောက်သေးခင်တစ်ခုခုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့....။ ကျုပ်လိုလန်းလန်းဆန်းဆန်းရှိနေသင့်တယ်ထင်တယ်”.....
“ကျုပ်ခြေလှမ်းတွေ ရွေ့လျားနေသရွေ့တော့ ပွဲတော်ဆီကိုရောက်ဖို့ အခွင့်အရေးရှိပါသေးတယ်”...
စကားအဆုံးတွင် သက်ပြင်းတစ်ချက်ကို ခပ်ငွေ့ငွေ့သာ သူချမိလိုက်၏။ ထို့နောက် သူတို့ဆက်လျှောက်ဖြစ်ခဲ့ ကြသည်။ ဝေးကွာလွန်းနေဆဲဖြစ်သောရပ်ဝန်းရှိ ပွဲတော်ဆီမှ ဂီတသံစဉ်များကိုလည်း လေအသင့်တွင် ရံဖန် ရံခါ ကြားနေခဲ့ရပြန်သေး၏။ အတူတူလျှောက်နေရင်းမှပင် ထိုလူရွယ်သည် အတော်စကားပြောနိုင်ကြောင်း သူ သိခဲ့ရလေတော့သည်။ သို့သော် ပျင်းရိညည်းငွေ့ဖွယ်ကောင်းသော ဒီခရီးလမ်းတွင် သူ့ကိုအဖော်လုပ် ကာ စကားပြောပေးနေခဲ့သည့်ထိုလူရွယ်ကို သူ့ဘက်ကနေပြီး ကျေးဇူးပင်ကျိတ်ကာတင်နေမိခဲ့သေး၏။
ထိုလူရွယ်ပြောသောစကားများထဲတွင် အာကာသအကြောင်းလည်းပါသည်။ လူမျိုးတို့၏ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု သမိုင်းကြောင်းများလည်းပါ၏။ ထို့အတူ....အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲလာသော ယဉ်ကျေးမှုရေစီးကြောင်းမှ သည် သိပ္ပံပညာနှင့် အနုပညာဆိုင်ရာဆင့်ကဲတိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုများအထိ အတော်ပင်စုံလင်လွန်းလှ သည်။ အကြောင်းအရာပိုင်းအတော်စုံသလို သူ့အတွက်လည်း ဗဟုသုတဖြစ်စေသောစကားများမို့ အာရုံ စိုက်ကာ သူနားထောင်နေမိခဲ့လိုက်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ဗဟုသုတကြွယ်ဝသူတစ်ယောက်နှင့် တစ်ခရီးတည်း သွားရခြင်းမှာ လမ်းခရီးတွင် သူ့အတွက်အထောက်အပံ့ကောင်းဖြစ်စေနိုင်မည်ဟုလည်း ယုံကြည်စိတ်ချမိခဲ့ သေး၏။
ညသည် ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာခဲ့လေသောအခါ ကြယ်ရောင်တို့သည် ပိုမိုတောက်ပစွာဖြင့် လင်းလက်လာခဲ့ ကြရလေတော့သည်။ ကြွေခြင်းရဲ့အစက ဝေခြင်းပဲလား....၊ ဒါမှမဟုတ် အတူတူပဲလား။ မြင်မြင်ကရာ ရန် သူတွေမမှတ်လိုက်ပါနဲ့ကွယ်...။ သံခေါင်းစွပ်လူသားတွေမှာ နှလုံးသားတစ်စုံရှိတာသေချာပါရဲ့....။ ခရီးပန်း လာသူများအတွက် နှင်းဆီတစ်ပွင့်လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါရစေ...။ အနီရဲရဲလေးဆိုရင်တော့ ကောင်းမယ်...။ တိမ်စိုင်နဲ့ မိုးသားတွေက အတူတူပဲလား..၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သစ္စာတော်တံဆိပ်ခတ်နှိပ်ထားတဲ့ အပြာရောင် ကျောက်တုံးလေး တစ်ခုကိုတော့ ငါ့မြေပုံမှာထားရစ်ခဲ့မိချင်ပါရဲ့....။
သူတို့နှစ်ယောက်ခရီးနှင်နေခဲ့လေသည်မှာ အတော်ခရီးပေါက်ခဲ့လေပြီဖြစ်၏။ တစ်နေရာအရောက်တွင် လမ်းနံဘေးဆီမှ စမ်းချောင်းလေးတစ်ခုကို နှစ်ယောက်သားမြင်တွေ့လိုက်ရသည်။ စမ်းချောင်းကလေးမှာ တောင်စောင်းနံရံဆီမှနေပြီး သွယ်တန်းစီးကျနေခဲ့တာဖြစ်၏။ မောလည်းမော....၊ ဆာလည်း ဆာလောင် နေခဲ့ကြပြီမို့ ထိုနေရာလေးတွင်ခရီးတစ်ထောက်နားကြရန် နှစ်ဦးသားစိတ်တူကိုယ်တူ ဆုံးဖြတ်မိလိုက်ကြ သည်။
ထို့ကြောင့်စမ်းချောင်းကလေးနံဘေးတွင် သူတို့၏အထုပ်အပိုးများကိုချကာ ခဏတာအမောဖြေလိုက်မိကြ၏ ။ နောက် စမ်းချောင်းကလေးရဲ့အစပ်ရေတိမ်တိမ်နေရာလေးဆီကိုသွားကာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးမနီးမဝေးအနေ အထားဖြင့် ကိုယ်စီ ကိုယ်လက်သန့်စင်မိကြလေတော့သည်။ စမ်းချောင်းကလေးရဲ့မျက်နှာပြင်က ကြယ်အ လင်းရောင်အောက်တွင် ငွေရောက်လက်နေခဲ့ရသလိုလိုပင်....။
အားရကျေနပ်စွာအော်လိုက်သော လူရွယ့်အသံကြောင့် မျက်နှာသစ်နေရာမှ သူလှမ်းကြည့်မိလိုက်သည်။ လူသူကင်းရှင်းသောနေရာမို့ လူရွယ်ကစိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ကိုယ်လက်သန့်စင်နေခဲ့သည်ထင်၏။ စောစော က၀တ်ထားသော အဖိုးတန်ဝတ်ရုံကိုပင် ပေါင်လယ်လောက်အထိမတင်ထားကာ အားရပါးရကိုယ်လက်သန့် စင်နေခဲ့တာကို သူတွေ့လိုက်ရတာမို့ဖြစ်သည်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်တိုင်းကျ ကိုယ်လက်သန့်စင်လိုက်မိ ရတာမို့ စိတ်ကျေနပ်စွာဖြင့် အနီးမှ လူရွယ်ကိုငေးမောကြည့်နေမိခဲ့လိုက်၏။ ကြယ်ရောင်အောက်တွင် လူ ရွယ်ကတော့ အားရပါးရ ကိုယ်လက်သန့်စင်နေခဲ့ဆဲ...။
ကြည့်နေရင်း သူ့ရင်ထဲတွင် ဟင်ခ,နဲ တစ်ချက်မြည်တမ်းသွားရသည်။ အခြားကြောင့်တော့မဟုတ်.....၊ ထို လူရွယ်၏ ညာဖက်ခြေထောက်၊ ဒူးကောက်ခွက်နေရာတွင် ကြီးမားသောအနာအိုင်းကြီးတစ်ခုကို တွေ့လိုက် ရတာမို့ပဲဖြစ်၏။ အနာမှာကြီးမားရုံပင်မကသေးပါ၊ ပိုးလောက်လန်းများပင် တွယ်ကပ်စ,ပြုနေခဲ့ရလေပြီ။ ဒါဆို ပွဲတော်အတွင်းသို့ ထိုလူရွယ်ဝင်ခွင့်မရနိုင်တာသေချာခဲ့လေပြီ။ မသွားသင့်တာ......သေချာနေခဲ့လေပြီ။ ဘာ ရယ်ကြောင့်မှတော့မဟုတ်၊ ပွဲတော်တွင် အနာရောဂါဖြစ်တည်ခံစားနေရသူများအား ၀င်ခွင့်မပြုပါ။ အခြား သော သူများအားကူးစက်စေမှာကို ပွဲတော်စီစဉ်သူများက စိုးရိမ်လို့သာဖြစ်သည်ဟု သူကြားဖူးထားသည်။
ထို့အတွက် ပွဲတော်အ၀င်အ၀တွင် ကိုယ်တိုင်အနာရောဂါမရှိပါဟု ရိုးသားစွာဝန်ခံပြီးမှ ပွဲတော်အတွင်းသို့ လူ တိုင်းဝင်ကြရသည်။ လှန်လှောမစစ်ဆေးကြပါ။ သို့သော် ရိုးသားစွာ၊ ထို့ထက်ပိုပြီး အလွန်ရိုးဖြောင့်စွာ ၀န်ခံ ကြရမည်ဖြစ်၏။ ဒါဆိုရင် ဒီလူရွယ်ဟာ အနာကြီးရှိရဲ့သားနဲ့ ဘာ့ကြောင့်များပွဲတော်ကိုလာခဲ့ရပါသလဲဟု သူ ဇဝေဇ၀ါနိုင်စွာတွေးမိရင်း ငေးငိုင်စွာကြည့်နေမိဆဲ.....။
ထိုစဉ် ရုတ်တရက်ဆိုသလို သူ့ဘက်သို့ လူရွယ့်မျက်နှာက လှည့်လာသည်။ တွေဝေကာမှင်တက်မိသလို ရှိနေသောသူ့ကိုကြည့်ရင်း လူရွယ်က.........ဘာသာပြန်သတိထားမိသွားသလို သူ့ဝတ်ရုံကိုဆွဲချလိုက်၏။ ထို့ နောက် သူ့အနီးဆီသို့ စိမ်းခက်သောမျက်ဝန်းများဖြင့်ကြည့်ရင်း တိုးကပ်လာသည်။ လူရွယ်၏ခြေအရွေ့ ကြောင့် စမ်းရေများဘောင်ဘင်ခတ်သွားသံကိုပင် နားထဲကြားလိုက်ရ၏။ လူရွယ်သူ့ကိုဘာများ လုပ်မလို့လဲ ဟု အလျှင်အမြန်တွေးတောမိလိုက်သည်။ လူရွယ်၏မျက်ဝန်းများထဲတွင် ရုတ်ချည်းဆိုသလိုပြောင်းလဲယှက် သန်းလာနေခဲ့သောအရိပ်အငွေ့များက မြေခွေးတစ်ကောင်ရဲ့လက်သည်းများလိုပင်။ ရင်တွင်းမှ သူတီးတိုး ဆိုမိလိုက်ပြန်၏။ “မင်းမရိုးသားတဲ့နည်းနဲ့ ပွဲတော်ကို မသွားသင့်ဘူး” ဟု။ သို့သော် သူ့နှုတ်ဖျားမှနေပြီး အသံ တို့က ထွက်ကျမလာခဲ့။ စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းကြီးစွာဖြင့် သူနောက်သို့ ခြေတစ်လှမ်းဆုတ်လိုက်မိခဲ့၏။
သို့သော် ခြေကျင်းဝတ်သာသာမြုပ်နေခဲ့လေသော စမ်းရေအတွင်းမှသူ့ခြေဖ၀ါးများက ရေညှိများဖြင့် ချော မွတ်နေခဲ့သောကျောက်ခဲတစ်လုံးကို သတိမပြုမိစွာဖြင့် မိမိရရတက်နင်းမိသွားသည်။ သူဟန်ချက် ပျက်သွား ရ၏။ ထို့အပြင် ရေထဲတွင် လဲပြိုကျသွားတော့မလိုဖြစ်သွားသည်။ ထို့ကြောင့် အယောင်ယောင် အမှားမှား နိုင်လှစွာဖြင့် ရှေ့သို့ငိုက်စွာလဲပြိုခါနီးတွင် အနီးကိုရောက်လာနေပြီဖြစ်သော လူရွယ်၏အင်္ကျီစကို အမှတ်မ ထင်လှမ်းကာဖမ်းဆုပ်မိလိုက်၏။
အချိန်တိုအတွင်းမှာပင် သူ့ဟန်ချက်ကိုထိန်းချုပ်သွားနိုင်ခဲ့ရသည်။ သူလဲကျမသွားခဲ့။ သို့သော် ဗြိခနဲနေသည့် အ၀တ်စပြဲရှသံတစ်ခုနှင့်အတူ သူ့လက်ထဲတွင် တစ်စုံတရာကိုဖမ်းဆုပ် ကပ်ပါလာစေခဲ့၏။ သူတို့နှစ်ယောက် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် စမ်းရေများ၏ ဘောင်ဘင်ခတ်သံက ခပ်အုပ်အုပ်ထွက်ပေါ်သွားခဲ့ရသေးသည်။
“လာ.....လာ....။ ခင်ဗျားကိုကြည့်ရတာ အားနည်းနေသလိုပဲ။ ကုန်းပေါ်တက်ပြီး အနားယူလိုက်ပါဦး”....
ချိုသာစွာပြောလိုက်သော လူရွယ့်လေသံကြောင့် သူ့စိတ်ထဲတွင် အံ့သြသွားမိခဲ့၏။ အယောင်ယောင် အမှားမှားဖြင့် လူရွယ့်ကို သူမော့ကြည့်မိလိုက်တော့ လူရွယ့်မျက်နှာက ပြုံးချိုမြလျှက်၊ ဂရုဏာရိပ်ပင် ယှက်သန်းနေခဲ့သေးသလိုလို။ ဒါဆို စောစောက သူအမြင်မှားခြင်းပဲလား..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့စိတ်တွေ ဇဝေ ဇ၀ါနိုင်သွားခဲ့ရသည်။
လူရွယ်ပြောသလို ရေစပ်ရှိကုန်းပေါ်သို့ သူတက်ခဲ့လိုက်သည်။ လူရွယ်က ဘေးမှနေပြီး ဖေးမချင်ဟန်ပင်ပြုခဲ့ သေး၏။ သို့သော် သူလက်ကာပြလိုက်မိသည်။ ထို့နောက် မြေပေါ်တွင် အသာထိုင်ချရင်း တောင်းပန်စကား တစ်ခွန်းကို သူခပ်တိုးတိုးပြောလိုက်၏။
“ကျုပ်ကြောင့် ခင်ဗျားရဲ့ဝတ်ရုံအနား စုတ်ပြဲသွားရပြီ...၊ အများကြီးဝမ်းနည်းစွာ တောင်းပန်ပါတယ် ခင်ဗျာ”...
ဘာမှအရေးမကြီးသောဟန်၊ သဘောထားကြီးသံစွက်လျှက် လူရွယ်ကပြောသည်။ ပြောပြီး လူရွယ်က သူနှင့် ခပ်လှမ်းလှမ်းရှိရသို့သွားကာ သူ့စားသောက်စရာများကို ထုတ်ယူနေခဲ့လေတော့သည်။ သူစိတ်သက်သာရာ ရသွားမိ၏။ ထို့ကြောင့် သက်ပြင်းတစ်ချက်မှုတ်ထုတ်လိုက်ရင်း လက်ထဲမှ အ၀တ်ပြဲစကို ဖြန့်ကြည့်မိလိုက် သည်။ သူထပ်မံအံ့သြသွားမိပြန်၏။ စောစောက သူထင်နေခဲ့သလို လူရွယ်၏၀တ်ရုံမှဖျင်စမှာ အကောင်းစား ၊ အဖိုးထိုက်တန်သည့် အမျိုးအစားမဟုတ်တာမို့ပင်ဖြစ်သည်။ အညံ့စား၊ ဆေးဆိုးပန်းရိုက်ဖျင် ထည်တစ်ခုမျှ ပင်။ ထို့အတူ ဖျင်စပေါ်မှကျောက်သံပတ္တမြားတို့သည်လည်း...သူထင်ထားခဲ့သလိုအဖိုးထိုက် တွင်းထွက်ရတ နာအစစ်များမဟုတ်ခဲ့လေကြ။ ပုလင်းကွဲများကိုသွေးကာ...အရောင်ဆိုးထားခဲ့သော ကျောက်မျက်ရွဲအတု များပင် ဖြစ်နေခဲ့တာကို သူသေသေချာချာသိလိုက်ရပြန်သည်။ ဒါဆို ဒီလူရွယ်ဟာ မရှိတာကို ရှိဟန်ဆောင် နေခဲ့သူ တစ်ယောက်ပေါ့...ဟု စိတ်မသက်သာစွာတွေးလိုက်မိ၏။ လောကမှာ ဟန်ဆောင်သူတွေဟာ ကြာ ရှည်မခံတတ်တာ၊ အဲ့ဒီလိုလူတွေအတွက် နေရာများများစားစား မရှိခဲ့တာကို......... မင်းသိစေချင်လှပါတယ် ကွယ်...။
အတွေးများကို သူရပ်တန့်ပစ်လိုက်မိသည်။ နောက် အိတ်ထဲမှ စားစရာများကိုဖွင့်မိတော့ လူရွယ်က သူ့အ နားဆီသို့ လျှောက်လာကာ...
“အဖိုးကြီး...ပေါင်မုန့်ရှိရင် နည်းနည်းမျှပါဦးလားခင်ဗျာ...၊ ကျုပ်ယူလာတာနဲ့ မလောက်ငလို့ဗျ”......
“ရပါတယ်...။ ဒီမှာ လာယူပါ မိတ်ဆွေ”....
အိတ်အဟောင်းလေးထဲမှ ပေါင်မုန့်ကြမ်းတစ်လုံးကိုထုတ်ယူကာ သူကမ်းပေးလိုက်တော့ လူရွယ်က လှမ်းယူ ရင်း....
“ခင်ဗျားဟာကလည်း ပေါင်မုန့်အကြမ်းကြီးပါလားဗျ....၊ အေးပေါ့လေ... ကျုပ်က ပေါင်မုန့်အကြမ်းဆို မစား ခဲ့ပေမယ့်လည်း အခုတော့ ရှိတာနဲ့မတင်းတိမ်နိုင်လို့ ဒါကိုပဲ လွေးရတော့မှာပါပဲ”....
သူခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်မိသည်။ ထို့နောက် စားစရာများကို ခပ်သုတ်သုတ်စားရင်း ခရီးဆက်ရန်ပြင်ဆင်မိခဲ့ကြ လေတော့၏။
အာရုံဦးဆီသို့ ချဉ်းကပ်လာသောအခါ....... မြူနှင်းတို့သည်ပိုမိုထူထပ်စွာ ကျဆင်းလာခဲ့လေတော့သည်။ ကြယ်ရောင်တို့သည်လည်း ပိုမိုရင့်ကျက်စွာလင်းဖျာလာခဲ့ကြလေတော့သည်။ ပေးခြင်းယူခြင်း သီအိုရီတွေ ကိုပို့ချမဲ့သင်တန်းတစ်ခု ဘယ်နေ့ရက်ချိန်ခါမှာ ဖွင့်လာမှာလဲ....။ လက်တစ်စုံအေးစက်နေရခြင်းဟာ သွေး ကြောမွှာလေးတွေရဲ့ အလုပ်မလုပ်ခြင်းကြောင့်လား ပြင်ပရာသီဥတုကြောင့်လား.။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ထီးဆောင်း တတ်ဖို့ ငါအားထုတ်ရဦးမယ်....။ ဖိနပ်ပေါက်တယ်ဆိုပြီး ငိုနေမယ့်အစား....အဲ့ဒီဖိနပ်ကို အရင်ချွတ်ပစ်လိုက် တာက ပိုသက်သာရာရစေလိမ့်မလားကွယ်...။ လေပြေတွေနမ်းမှာစိုးရွံ့ရင်တော့ မင်းအိမ်ထဲကနေ အပြင်မ ထွက်လိုက်ပါနဲ့တော့.....။
သူတို့ဆက်လျှောက်နေခဲ့မိကြသည်။ လမ်းက တဖြည်းဖြည်းမတ်စောက်လာခဲ့ချေပြီ။ ထို့အတူ ပိုမိုစွာပင် ကျဉ်းမြောင်းလာခဲ့သလိုလို။ လေတွေကတော့.......တဟူးဟူးတိုက်ခတ်နေခဲ့ကြလေ၏။ ထို့အတူ လူရွယ်က လည်း စောစောကလိုပင် စကားတွေရွှန်းရွှန်းဝေအောင်ဆိုနေဆဲ။ သို့သော် သူ့စိတ်ထဲတွင်တော့ လူရွယ်၏ ၀တ်ရုံမှ ဖျင်စ၊ ကျောက်မျက်ရွဲအတုများနှင့်အတူ ဒူးကောက်ခွက်နေရာမှ အနာအိုင်းကြီးအကြောင်းတို့ကို ခ ဏခဏ တွေးနေမိခဲ့သည်။ တွေးရင်း စောစောကအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့စွာ နားထောင်နေခဲ့မိသော လူရွယ်၏စ ကားများကိုလည်း ပိုမိုဂရုစိုက်စွာ နားထောင်မိလာလေတော့၏။ ထိုအခါတွင် သူရေးတေးတေးသိလိုက်ရ တာကတော့ လူရွယ်၏ပြောစကားများသည် အဆီအငေါ်မတည့်စွာဖြင့် ရှေ့နောက်မညီဖြစ်နေခဲ့ကြမှန်းပင်။
သူ့ကိုယ်တွင်းမှ သတိပေးသံကို ပြန်ကြားရတော့ ရှက်ပြုံးပြုံးမိလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် လူရွယ့်ဘေးမှ တိတ်တ ဆိတ်လိုက်ပါလျှောက်လှမ်းနေခဲ့လိုက်၏။ တောင်စောင်းတစ်ခုအကွေ့ လမ်းကျဉ်းလေးအရောက်တွင် ရုတ် တရက်ဆိုသလို လူရွယ်ကရပ်တန့်လိုက်ပြီး သူ့ကိုခေါ်သည်။
သူလည်း ခြေစုံရပ်တန့်လိုက်ပြီး လူရွယ့်ကို မျက်လုံးဖြင့်ပြန်ထူးရင်း ကြည့်လိုက်မိ၏။
“ခင်ဗျားကို တစ်ခုပြောချင်တယ်....၊ ကျုပ်မှာ အနာအိုင်းကြီးရှိတဲ့ကိစ္စကို ပွဲတော်ရောက်ရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ ပြောမပြဖို့ပါပဲ”.....
သူခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်မိ၏။ စိတ်ထဲမှနေလည်း မင်းရဲ့ဝတ်ရုံဟာ တန်ဖိုးမရှိတဲ့အပေါစားတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထား တယ်ဆိုတာကိုလည်း ငါဘယ်သူ့ကိုမှ ပြောဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး...ဟု ဆက်ပြောမိလိုက်သည်။ လူရွယ်က စိတ်ကျေနပ်သွားသလိုဖြင့် သူ့ကို တစ်ချက်ကြည့်ရင်း ပြုံးပြသည်။ သူလည်းပြန်ပြုံးပြလိုက်မိ၏။ ထို့နောက် သူတို့ဆက် လျှောက်မိခဲ့ကြ၏။
လမ်းများသည် တဖြည်းဖြည်းဖြင့် ပိုမိုစွာကျဉ်းမြောင်းလာသည်ထင်ရ၏။ တောင်ထိပ်ဖျားရှိ ပွဲတော်ဆီမှ ဂီတ သံစဉ်များကိုလည်း ပိုမိုပီပြင်စွာကြားလာရသလိုပင်....။ သူတို့နှစ်ယောက်ခြေလှမ်းတွေအနည်းငယ်ပိုမို သွက်လက်လာသလိုဖြစ်လာသည်။
ထိုစဉ် မြူနှင်းများရိပ်ခနဲ ပြိုဆင်းလာချိန်တခဏတွင် သူ့နောက်ကျောဖက်ဆီမှ ဆစ်ခနဲနာကျင်သွား၏။ အံ့သြ စွာဖြင့် သူလှည့်ကြည့်မိတော့ လူရွယ်၏လက်ထဲတွင် သွေးစွန်းနေခဲ့လေသော ဓားမြောင်တစ်ချောင်း က သူ့ကို အေးစက်စွာပြုံးပြနေခဲ့လေသည်။ သူ့အမြင်တွေပိုမိုေ၀၀ါးသွားသည်။ ဒူးခေါင်းများခွေညွှတ်စွာ ပြိုကျလုဆဲဆဲ လူရွယ်၏ မခိုးမခန့်ရယ်သံကို ခပ်သဲ့သဲ့ကြားလိုက်ရပြန်သည်။
“ခင်ဗျားကို ကျုပ်မယုံဘူး....။ ပွဲတော်မှာကျုပ်ကို အချိန်မရွေးဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ခင်ဗျားကို ဒီလိုနည်းနဲ့မှ နောက် ကျောကို ဓားနဲ့ထိုးမသတ်ရင်မဖြစ်ဘူး....၊ ခင်ဗျားက ကျုပ်အကြောင်းတွေ”.....
သူဆက်နားထောင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့....။ တစ်ကယ်ဆို မင်းအကြောင်းတွေဟာ..လူတွေကို စိတ်ညစ်ညူး သွားစေနိုင်တာမို့ ငါဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောပြဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားသူပါကွယ်...။ သူ့မျက်လုံးတွေပိုမိုပြာဝေလာ သည်။ မြေကြီးပေါ်သို့ သူလဲကျမသွားခင် လူရွယ်၏ ရယ်သံသဲ့သဲ့ကို ကြားလိုက်ရသေးသည်။ ထို့အတူ သူနှင့် ဝေးရာဆီသို့ လှမ်းသွားသော လူရွယ်၏ ခြေသံခပ်သဲ့သဲ့...။
ညင်သာသော လေပြေများတစ်ရှိုက်နမ်းလိုက်သောခဏတာတွင် သူပြန်နိုးထလာခဲ့ရ၏။ ထို့နောက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် နားမလည်နိုင်စွာဖြင့် မေးမိလိုက်သည်။ ငါမသေသွားဘူးလားဟူ၍ပင်။ ဟုတ်သည်။ သူမသေ ခဲ့ပါ။ ကျောကုန်းကိုပြန်စမ်းကြည့်လိုက်မိတော့ စုတ်ပြဲရာတစ်ခုကိုစမ်းမိသည်။ ထိုစုတ်ပြဲရာကိုဖြစ်စေခဲ့သော နောက်ကျောကိုဓားနှင့်ထိုးသည့် ဓားချက်သည် သူ့အသက်ကိုမသေစေနိုင်ခဲ့ပဲ တစ်လျှောက်လုံး လူရွယ့်အ ပေါ်တွင် သူထားမိခဲ့သည့် ယုံကြည်ခြင်းအလွှာတစ်ခုကိုသာ စုတ်ပြဲသွားစေခဲ့တာမို့ပင်ဖြစ်၏။ သူ့နှလုံးသားဝိ ညာဉ်တစ်စုံကိုတော့ဖြင့် သတ်ပစ်နိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ပါ...။
လဲကျနေရာမှ သူထရပ်လိုက်မိသည်။ ထို့နောက် အသက်ကို ခပ်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်ရှိုက်ရင်း သူဆက် လျှောက်ဖို့ပြင်မိသည်။ လေပြေတို့သည် သူ့ကို နမ်းရှိုက်ကြဆဲ...။ ရောင်နီဦးသည် ချစ်စဖွယ်ကောင်းလွန်း လှစွာဖြင့် သူ့ကို မခို့တရို့ပြုံးပြနေခဲ့ကြ၏။ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခိုသည် နေ့အလင်းရောင်တို့ဖြင့် လင်းမြစပြုနေ ခဲ့ချေပြီ။
သူဆက်လျှောက်လာမိခဲ့သည်။ ရံဖန်ရံခါတွင် ပွဲတော်ဆီမှ ဂီတသံကိုတော့ ကြားနေရဆဲဖြစ်၏။ တစ်နေရာ အရောက်တွင် လေတိုးသောကြောင့် လှုပ်ခတ်နေသောအရာတစ်ခုကို သူတွေ့လိုက်ရ၏။ အနီးသို့ တိုးကပ် ကာကြည့်မိတော့ စောစောက သူ့နောက်ကျောကိုဓားဖြင့်ထိုးကာ ပြေးထွက်သွားသော လူရွယ်၏ ၀တ်ရုံအစ ပင်ဖြစ်နေခဲ့တာကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ဒါဆို လူရွယ်ရော......ဟု စိတ်ထဲမှတစ်ကိုယ်ရည်မေးခွန်း ထုတ်မိ လိုက်ဆဲ မျက်လုံးများက အနီးမှမြေပြင်ပေါ်သို့ရောက်သွားသည်။ မြေကြီးများသည် ချောက်ကမ်းပါး ဆီသို့ပဲ့ ကြွေကာပြို ဆင်းနေခဲ့တာတွေလိုက်ရသည်။ သူ့မျက်ဝန်းများသည် နက်ရှိုင်းလှသောချောက်ထဲသို့ မျှော်ငေး မိ၏။ ထိုအခါ လေထဲတွင် ၀ဲပျံနေခဲ့လေသော လင်းတငှက်များကို အမှတ်မထင်စွာ တွေ့လိုက်မိတော့သည်။
ထိုစဉ် အဝေးရှိပွဲတော်ဆီမှ ဂီတသံခပ်သဲ့သဲ့ကို သူ့နားထဲကြားလိုက်ရပြန်၏။ ။
စာရေးသူ ~ဏီလင်းညို~ စာရေးပြီးချိန် 3:55 AM 11 comments:
ခင်မင်ရတဲ့ မောင်နှမတွေထဲက အစ်မတစ်ယောက်က .comတစ်ခုလက်ဆောင်ပေးလို့....။
ကျွန်တော့် ဘလော့ဂ်လေးကိုhttp://www.nyelinnnyo.com/ ဆိုပြီး လင့်ခ်ပြောင်းချိတ်ပေးပါလို့.....။
လောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော့်ဆီကနေ ပျောက်သွားတဲ့ လင့်ခ်တွေကို လက်လှမ်းမှီသလောက်ပြန်ထည့်နေပါတယ်......။
စာတွေရေးနိုင် ဖတ်နိုင်ဖို့လည်း ကြိုးစားနေပါကြောင်း.......။
စာရေးသူ ~ဏီလင်းညို~ စာရေးပြီးချိန် 8:17 AM 14 comments:
Labels: ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ, ကြေငြာ